နေ့စဉ်သတင်းများ စုဆောင်းတင်ပြခြင်း ၊ နစေ့ဉျသတငျးမြား စုဆောငျးတငျပွခွငျး – Federal Journal
နေ့စဉ်သတင်းများ စုဆောင်းတင်ပြခြင်း ၊ နစေ့ဉျသတငျးမြား စုဆောငျးတငျပွခွငျး
(No. 43, July 21, 2020)
၁။ KBC ခေါင်းဆောင် Rev. Dr. Hkalam Samson ရဲ့ KIO လိုင်ဇာမှ မြစ်ကြီးနား အပြန်လမ်း စစ်ဆေးခံရ
၂။ နော်မုနော် ပစ်သတ်ခံရမှု တရားမျှတမှုရရှိရေး ကရင်အဖွဲ့များ ဝိုင်းဝန်းဖိအားပေးရန် KNU Concerned Group တိုက်တွန်း
၃။ မြဝတီမြို့ Quarantine စခန်း ၂ ခုမှ ရွှေ့ပြောင်းမြန်မာလုပ်သား ၅၀ ဦးခန့် အစာအဆိပ်သင့်မှု ဖြစ်ပွား
၄။ ရှထိုးဇွပ်ကျေးရွာ ရေးဘေးသင့်ပြည်သူများအတွက် အကူအညီလိုအပ်နေ
၅။ ကယားပြည်နယ် ဖားဆောင်းတွင် KNP သုံးနေရာ ဝင်ပြိုင်မည်
၆။ ခေါင်လန်ဖူးဒေသ သတ္တုတူးဖော်မည့်အစီစဉ်ကို Fortuna Metals ကုမ္ပဏီဘက်က ရပ်နားထား
၇။ ကိုဗစ်-၁၉ ကာလ လွိုင်လင်မြို့နယ်ကျေးလက်ဒေသခံများ စားနပ်ရိက္ခာ ခက်ခဲ
၈။ တောင်သူတွေကို တရားစွဲဆိုမှု ပြင်ဆင်ချက်တက်တဲ့အမှုတွေက ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲမှာ တစ်ဆို့မှုဖြစ် စေနိုင်
၉။ တောင်သူတွေနဲ့ တပ်မတော်ဖြစ်ပွားနေတဲ့ ပြဿနာကို အစိုးရက ဖြေရှင်းပေးဖို့ ပြည်နယ်အခြေစိုက် တိုင်းရင်းသား ပါတီတွေတာင်းဆို
၁၀။ မြဝတီမြို့တွင် လက်ပစ်ဗုံး ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားပြီး ၁ ဦး ဒဏ်ရာရ
၁၁။ ပအိုဝ်းအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် (PNO) ပါတီက အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲတွင် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ရှမ်း၊ ကယားနှင့် မွန်ပြည်နယ် တို့ရှိ ၂၂ မြို့နယ်၌ ၃၄ နေရာဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည်
၁၂။ နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေ အမြန်ဆုံးစတင်ဖို့ မြောက်ပိုင်း သုံးဖွဲ့ ကမ်းလှမ်း
၁၃။ ပလက်ဝဒေသခံ ရွာသားတစ်ဦးကို AA က သတ်ဖြတ်ခဲ့တာ ကန့်ကွက်ကြောင်း KACC ထုတ်ပြန်
၁၄။ ရွာသူအမျိုးသမီးတစ်ဦး ပစ်သတ်ခံရမှုအပေါ် KNLA ကန့်ကွက်၊ စုံစမ်းဖော်ထုတ်အရေးယူရန် JMC-S သို့ တိုင်ကြား
၁၅။ အမ်းမြိုပေါ်ရှိ ချင်းစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူများ ရိက္ခာနှင့် ယာယီအဆောင်များလိုအပ်နေ
၁၆။ ရွေးကောက်ပွဲကျင့်ဝတ် CoC စောင့်ကြည့်ကြပ်မတ်ရေးကော်မတီဖွဲ့စည်းမည်
၁၇။ ဆီဆိုင်ကုန်းမြင့်မြေ ကို အစားထိုးပေးပါက တိုင်းရင်းသားအချင်းချင်းပြဿနာဖြစ်လာနိုင်
၁၈။ ကယားပြည်နယ်တွင် အထက်တန်းကျောင်း ၁၈ ကျောင်းသာ ဖွင့်လှစ်
၁၉။ တောင်ကုတ်မြို့နယ်၌ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် ၁ ဦး ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် သေနတ်ဖြင့် ပစ်ခတ် အဆုံးစီရင်
၁။ KBC ခေါင်းဆောင် Rev. Dr. Hkalam Samson ရဲ့ KIO လိုင်ဇာမှ မြစ်ကြီးနား အပြန်လမ်း စစ်ဆေးခံရ
ကချင်နှစ်ခြင်းခရစ်ယာန်အဖွဲ့ချုပ် KBC ခေါင်းဆောင် Rev. Dr. Hkalam Samson သည် ကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ KIO လိုင်ဇာမြို့မှ မြစ်ကြီးနားမြို့သို့ ပြန်လာချိန် Nam San Yang ကျေးရွာတွင် တပ်မတော်မှ ပိတ်ပင်တားဆီးမှုများရှိခဲ့သော် လည်း ပြန်လည်ထွက်ခွာလာနိုင်ပြီဟု သိရသည်။
ကချင်စစ်ရှောင်များနေရပ်ပြန်နိုင်ရေးလုပ်ဆောင်နေသော KHCC အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူ Rev.Dr. Hkalam Samson သည် ယခင်က တပ်မတော်နှင့် အစိုးရကို အကြောင်းကြားမှုရှိခဲ့သော်လည်း ယခုအခေါက် မလုပ်နိုင်သဖြင့် စစ်ဆေးခံရခြင်း ဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။“အရင်ကတော့ KHCC အနေနဲ့သွားရင် အစိုးရနဲ့ တပ်မတော်ကို အကြောင်းကြားတယ်။ ဒီတစ်ခေါက် တော့ အလုပ်များသွားတော့ မလုပ်နိုင်တော့ဘူး။ ဒီတော့ ပြန်အကြောင်းကြားပြီးမှ ထွက်လာနိုင်ခဲ့တယ်။ အားလုံးအဆင်ပြေ ပြီ။” ဟု ဆရာဆမ်ဆွန်က ပြောသည်။
Rev.Dr.Hkalam Samson နှင့် KHCC အဖွဲ့သည် လွန်ခဲ့သည့်အပတ် နေပြည်တော်တွင် ပြည်ထောင်စုလူကယ်ပြန် ဝန်ကြီးတို့နှင့်တွေ့ဆုံပြီး ကချင်စစ်ရှောင်များနေရပ်ပြန်နိုင်ရေးအတွက် တတိယအကြိမ်မြောက်သွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့သည် ဟု သိရသည်။ ထို့နောက် မြစ်ကြီးနားမှ ကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ KIO ဌာနချုပ် လိုင်ဇာမြို့သို့ ဇူလိုင် ၁၆ ရက်နေ့တွင် အစည်းအဝေးအတွက် သွားရောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟု သိရသည်။ “အဲဒီပိတ်မိတဲ့နေ့မှာဘဲ တိုင်းမှူးကိုအကြောင်းကြား၊ ပြည်နယ် အစိုးရကို အကြောင်းကြာပြီး နားလည်အောင်ပြောပြတယ်။” ဟု ထပ်မံပြောဆိုသည်။ https://burmese.kachin news.com/2020/07/20/kbc%e1%80%81%e1%80 %b1%e1%80
တပ်မတော်သားနှစ်ဦး၏ ပစ်သတ်ခြင်းခံခဲ့ရသည့် မူတြော်(ဖာပွန်)ဒေသခံ အမျိုးသမီး နော်မုနော် သေဆုံးမှု တရားမျှတမှုရ ရှိရေးအတွက် ကရင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများအပါအဝင် သက်ဆိုင်ရာ ကရင်အဖွဲ့အစည်းများ အားလုံးဝိုင်းဝန်းပါဝင် ဖိအားပေးရန်လိုအပ်ကြောင်း KNU Concerned Group က သဘောထားထုတ်ပြန်ကာ တိုက်တွန်းလိုက်သည်။
ပြီးခဲ့သည့် ဇူလိုင်လ ၁၆ ရက်နေ့က ဖာပွန် ခရိုင်၊ ဒွယ်လိုးမြို့နယ်၊ ပိုလိုးထာကျေးရွာနေ အသက် (၄၀)နှစ် အရွယ် နော်မု နော်ဆိုသူ အမျိုးသမီးကို တပ်မတော်သားနှစ်ဦးမှ ပစ်သတ်ခဲ့ပြီး လက်ဝတ်ရတနာများကို ချွတ်ယူသွားခဲ့မှုအပေါ် အပြင်း အထန်ကန့်ကွက်ရှုတ်ချကြောင်း အဆိုပါ အဖွဲ့က ဆိုသည်။ အဖွဲ့၏ ပြောခွင့်ရ ပဒိုနော်စီဖိုးရာစိန်က “ကရင်အမျိုးသား တွေရဲ့ လုံခြုံရေးအတွက် အကာအကွယ်ပေးနေပါတယ်ဆိုတဲ့ KNU အပါအဝင် ကရင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေ၊ ကရင် နိုင်ငံရေးပါတီတွေ အရပ်ဖက်အဖွဲ့ အစည်းတွေကော ကရင်ပြည်သူတစ်ရပ်လုံးအနေနဲ့က ဒီဖြစ်စဉ်အပေါ်မှာ အမှန်တရားပေါ် ပေါက်လာဖို့နဲ့ ကျူးလွန်သူတွေကို အရေးယူ ဆောင်ရွက်ဖို့က အတူတကွ ပူးပေါင်းဝိုင်းဝန်းဖို့လိုတယ်”ဟု ကေအိုင်စီသို့ ပြောသည်။
တိုင်းရင်းသားဒေသများ၌ မြန်မာ့တပ်မတော်၏ အလားတူ ရာဇဝတ်မှု ကျူးလွန်မှုများသည် စစ်ရေးလက်နက်သဖွယ် နှစ်ပေါင်းကြာရှည်စွာ ကျင့်သုံး ကျူးလွန်လာခဲ့ရာ ပြည်တွင်းတရားစီရင်မှုစနစ်ဖြင့် အရေးယူခြင်းသည် ထိရောက်မှုမရှိနိုင် ကြောင်းလည်း KNU Concerned Group က ပြောဆိုသည်။“ကျမတို့အနေနဲ့ Amnesty International (AI) နဲ့ Human Right Watch တို့လို နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းတွေကို ဒီကိစ္စတွေကို လာရောက်စုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့ တောင်းဆိုလိုတာပေါ့။ ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ ပြည်တွင်းက အစိုးရ အနေနဲ့က ဒီကိစ္စတွေအတွက် တရားမျှတမှုရရှိဖို့ လုပ်နိုင်စွမ်းမရှိဘူးဆိုတာ ကျမတို့ အရင်ကဖြစ်စဉ်တွေမှာ သိမြင်ခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်။ သူတို့ ကော်မတီဖွဲ့စုံစမ်းတာတွေ အရေးယူတာတွေက တရားမျှတမှုမရှိဘူး။” ဟု ပဒိုနော်စီဖိုးရာစိန်က ဆက်ပြောသည်။
မြန်မာ့တပ်မတော်၏ မတရားညှင်းပန်းနှိပ်စက်မှုများ၊ အကြောင်းမဲ့ သတ်ဖြတ် ခြင်းများ၊ အဓမ္မပြုကျင့်မှုများ အပြင် ပြည်သူ လူထုများ၏ ပစ္စည်းဥစ္စာများကို အတင်းအဓမ္မရယူခြင်းများ ရပ်တန့်သွားနိုင်ရေး နှင့် ထိရောက်စွာအရေးယူ တားဆီးဟန့် တားနိုင်ရေးအတွက် Amnesty International (AI) နှင့် Human Right Watch ကဲ့သို့သော နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းများ မှ ဝင်ရောက်စုံစမ်းရန် KNU Concerned Group ၏ ယနေ့ ထုတ်ပြန်ချက်၌ တောင်းဆိုထားခြင်းဖြစ်သည်။ http://kicnews.org/2020/07/%e1%80%b1%e1 %80%94%e1%80%ac%e1% 80%b9%e1%80%99%e1%
ကရင်ပြည်နယ် မြဝတီမြို့ အမှတ်(၄)ရပ်ကွက်တွင် ဖွင့်လှစ်ထားသည့် Quarantine စခန်း ၂ ခုမှ ထိုင်းပြန်မြန်မာ လုပ်သား ၅၀ ဦးခန့်မှာ အစာအဆိပ်သင့်မှုဖြစ်ပွားပြီး မြဝတီခရိုင်ပြည်သူ့ဆေးရုံတွင် ဆေးဝါးကုသမှု ခံယူနေရ သည်ဟု သိရသည်။
ဇူလိုင်လ ၁၉ ရက် ညဦးပိုင်းက ရွှေမြဝတီဈေးသစ် Quarantine စခန်းမှ ထိုင်းပြန်မြန်မာလုပ်သား ၄၆ ဦးနှင့် ကျောက်လုံး ကြီးစခန်းမှ ၃ ဦး စုစုပေါင်း ၄၉ ဦးခန့်မှာ အစာအဆိပ်သင့်မှုဖြစ်ပွားသည့် ရောဂါလက္ခဏာများ ဖြစ်၍ မြဝတီခရိုင် ပြည်သူ့ ဆေးရုံကြီးသို့ ပို့ဆောင်ပေးရသည်ဟု တာဝန်ရှိသူများက ပြောသည်။ ရွှေမြဝတီဈေးသစ် Quarantine စခန်းမှာ Volunteer အဖြစ် ကျန်းမာရေးစောင့်ကြည့်ပေးလျက်ရှိသော ဒေါက် တာ စောဌေးမြင့်က“ ဒီလို အစာအဆိပ်သင့်မှုဖြစ်ပွား တာကို ဇူလိုလ ၁၉ ရက်နေ့ ၊ ညနေ ၅ နာရီခန့်မှာ မူးဝေ အော့အန်ပြီး ဝမ်းလျှောဝမ်းပျက်ဖြစ်ကြသူများ လာရောက် ပြောကြားလို့ စတင်သိရှိရပြီး ဆေးရုံသို့ပို့ဆောင်၍ ဆေးဝါကူသမှု ခံယူစေခဲ့ပါတယ်။ စိုးရိမ်စရာ အခြေအနေတော့ မရှိပါဘူး။ ပြန်လည် သက်သာ၍စခန်းသို့ ပြန် လည်နေထိုင်ကြသူတွေလည်းရှိပါတယ်” ဟု ပြောသည်။
မြဝတီမြို့ ပြည်သူ့ဆေးရုံသို့ ရောက်ရှိလာသည့် လူနာများထဲတွင် ရွှေမြဝတီဈေး Quarantine စခန်းမှ လူနာ အများစုသည် ညနေစာ စားပြီးချိန်တွင် အစာအဆိပ်သင့် လက္ခဏာ ဖြစ်ပွားခြင်းဖြစ်သည်။ သို့သော် ကျောက်လုံးကြီး စခန်းမှ ရောက်ရှိ လာသူ သုံးဦးသည် ညနေစာ မစားရသေးသော်လည်း အစာအဆိပ်သင့် လက္ခဏာ ဖြစ်ပွားသည့်အတွက် အစာအဆိပ်သင့် မှုသည် မည်သည့်အတွက်ကြောင့် ဖြစ်သည်ကို ကျန်းမာရေးဌာနက စိစစ်ဆဲဖြစ်ကြောင်း မြဝတီမြို့မှ ပြည်နယ်လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးသန့်ဇင်အောင်က ပြောသည်။
၎င်းတို့အား ပြည်နယ်နှင့်တိုင်းအလိုက် အစိုးရချင်းချိတ်ဆက်၍ ပို့ဆောင်ပေးမှုများရှိသလို မြဝတီနယ်စပ်တွင် Quarantine စခန်း ၈ ခု ခန့်ဖွင့်ထားပြီး ၂၁ ရက်ထားရှိကာ ကျန်းမာရေးစောင့်ကြည့်မှုများ ပြုလုပ်လျက်ရှိ ကြောင်း သိရသည်။ လက်ရှိ ရွှေမြဝတီဈေး Quarantine စခန်းတွင် ထိုင်းပြန်မြန်မာလုပ်သား ၅၀၀ ဦးခန့် ရှိကြောင်းသိရသည်။ http://kicnews.org/2 020/07/%e1%80%b b%e1%80%99%e1%80%9d%e1%80%90%e1%80%ae%e1%
ကချင်ပြည်နယ် ဟူးကောင်းလီဒိုလမ်းမပေါ်ရှိ ရှထိုးဇွပ်ကျေးရွာတွင် မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းမှုကြောင့် မိုးကောင်းချောင်းရေ မြင့်တက်လာပြီး ကျေးရွာအိမ်ခြေ ၂၀၀ ခန့်ရေဘေးသင့်နေကြောင်း ကျေးရွာအုပ်ချူပ်ရေးမှူးထံမှ သိရသည်။
ဇူလိုင် ၁၉ ရက်ညတွင် မိုးသည်းထန်စွာ ရွာသွန်းမှုကြောင့် ယနေ့ နံနက်ပိုင်း ၂ နာရီ မှ ၃ နာရီအတွင်း ရေစတင်ဝင်ရောက် လာခြင်းဖြစ်ပြီး နေအိမ်၊ စာသင်ကျောင်းနှင့် စစ်ရှောင်စခန်းတို့တွင် ရေပြည့်သွားသဖြင့် စစ်ပြေးဒုက္ခသည်များကိုလည်း ဘုရားကျောင်းဝင်းသို့ ရွှေ့ပြောင်းနေရာချပေးထားသည်ဟု ဆိုသည်။
“ စာသင်ကျောင်းတွင်း ဆရာမတွေနေတဲ့ နေရာ အကုန်ရေပြည့်နေတယ်။ ဆရာမတွေကို ကုန်းဘက် ရေမရောက်တဲ့နေရာ ရွှေ့ထားတယ်။ စစ်ရှောင်စခန်းလည်း ရေပြည့်သွားတော့ နဂိုစစ်ရှောင်တွေနေတဲ့နေရာတွေလည်း ဘုရားကျောင်းတွင်းတော့ ဟုတ်တယ်။ ဘုရားကျောင်းကနှစ်ခုရှိတဲ့အထဲ ရေမရောက်တဲ့ကုန်းဘက်က ဘုရားကျောင်းဆီရွှေ့ပြီး နေရာချထားပေးတယ်။”ဟု ရှထိုးဇွပ်ဒေသခံ ဆရာမုန်ဂျတ်ဒွဲ ကပြောသည်။ရေဘေးသင့်နေသော စစ်ရှောင်ပြည်သူများနှင့် ရွာသားများအတွက် ကူညီရေးနှင့် ကယ်ဆယ်ရေးများ မရောက်ရှိသေးကြောင်း ၎င်းကဆက်လက်ပြောဆိုသည်။ “အခုတော့ ရေဘေးသင့် အိမ်ခြေတွေကို ရေမရောက်တဲ့ ကုန်းဘက်ကိုရွှေ့ထားဆဲဖြစ်တယ်။ ရေကြီးတဲ့အထဲ သူတို့ဆန်တွေကအစ ပါသွားပြီပေါ့။ ရေကျသွားတဲ့အချိန်ထိစောင့်ပြီး ရေကျသွားတော့မှ ကိုယ့်နေအိမ် ကိုယ်ပြန်နေဖို့စီစဉ်နေတာ သူတို့အတွက် စားစရာ ကအစ ကူညီထောက်ပံ့မှုတွေလိုအပ်လိမ့်မယ်။” ဟု ရှထိုးဇွပ် ကျေးရွာအုပ်ချူပ်ရေးမှူး ဦးနော်ဒီးက ပြောသည်။
ရှဒူးဇွပ်ကျေးရွာတွင် လွန်ခဲ့သော ၄ နှစ်တုန်းခန့်က ရေကြီးခဲ့သော်လည်း ယခုနှစ်ရေကြီးမှုသည် ယခင်နှစ်များထက် ပိုဆိုး ရွားကြောင်းသိရသည်။ https://burmese.kachinnews.com/2020/07/20/%e1%80%9b%e1%80%be%1%e1%
ကယားပြည်နယ် (ကရင်နီပြည်)၊ ဘော်လခဲခရိုင်၊ ဖားဆောင်းမြို့တွင် ကရင်အမျိုးသားပါတီ(KNP)က လာမည့် ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲတွင် သုံးနေရာ ဝင်ပြိုင်သွားမည်ဟု ဖားဆောင်းမြို့နယ်၊ ဥက္ကဋ္ဌ စောဘီဝမ်းက ဇူလိုင် ၂၀ ရက်တွင် ကေအိုင်စီ သို့ ပြောသည်။
ဖားဆောင်းတွင် KNPက အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် တစ်ဦး၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် တစ်နေရာနှင့် ပြည်နယ်လွှတ်တော်အတွက် တစ်နေရာဝင်ပြိုင်သွားမည်ဖြစ်ကာ ဝင်ပြိုင်မည့်ကိုယ်စားလှယ် လောင်းများသည် အမျိုးသား များ ဖြစ်သည်ဟု KNP ဖားဆောင်းမြို့နယ် အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့နှင့် ပါတီဌာနချုပ် ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်များက ပြောသည်။“ကျနော်တို့ မြို့နယ်မှာ တချို့က ပါတီနိုင်ငံရေးနဲ့ နှစ် ၇၀ လောက်စိမ်းနေတာရှိတယ်။ တချို့ကလည်း ကရင်ပါ တီတွေနဲ့ စိမ်းနေတာလည်း ရှိတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ပါတီကြီးတွေနဲ့ ပြည်နယ်အခြေစိုက်ပါတီတွေ လည်းရှိတော့ ကရင် အမျိုးသား ပါတီနဲ့ စိမ်းနေတာမျိုးတော့ရှိတယ်။ သုံးနေရာလုံးအတွက် အကောင်းဆုံးကြိုး စားမယ်။ ရမယ်လို့ မျှော်မှန်း ထားတယ်” ဟု စောဘီဝမ်းက ပြောသည်။
ကရင်အမျိုးသားပါတီအနေဖြင့် ကယားပြည်နယ်၊ ဖားဆောင်းမြို့နယ်တွင် မြို့နယ် အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ ရုံးဖွင့်လှစ်ခြင်းကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာ ၂၄ ရက်နေ့တွင် ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးနောက် ယခုလို ရွေးကောက်ပွဲဝင်ရန် ညှိနှိုင်းဆုံးဖြတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သလို အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲများတွင် ကယားပြည်နယ်၌ ကရင်ပါတီတို့ ပထမ ဦးဆုံးအကြိမ် ဝင်ရွေးခံခြင်းလည်းဖြစ်သည်။
ကယားပြည်နယ်၊ ဘော်လခဲခရိုင်၊ ဖားဆောင်းမြို့နယ်၌ အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနမှ ထုတ်ပြန်သည့် ၂၀၁၉ ခုနှစ်ထိ စားရင်းများအရ စုစုပေါင်းလူဦးရေ ၂၃,၄၈၅ ဦးရှိကာ ကရင်လူမျိုး ၁၄,၈၆၃ ဦးရှိပြီး စုစုပေါင်း မြို့နယ်လူဦးရေ၏ ၆၃ ဒသမ ၂၆ (၆၃.၂၆)ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ထို့အပြင်၂၀၁၅ ခုနှစ်မဲ စာရင်း အရ ဖားဆောင်းတွင် မဲဆန္ဒရှင် ၁၂,၄၆၉ ဦးရှိကြောင်း ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က ထုတ်ပြန်ထားသည်။ http://kicnews.org/2020/07/%e1%80%80%e1%80 %9a%e1%80%ac%e1%80%b8%e1 %80%bb %e1%
ကချင်ပြည်နယ် ပူတာအိုခရိုင် ခေါင်လန်ဖူးမြို့နယ်ရှိ မြေဧက ၃သိန်းကျော်တွင် သတ္တု၊ ကြေးနီတူးဖော်မည့်အစီစဉ်ကို ရပ်ဆိုင်းထားရန် Fortuna Metals Company ကစာတင်ထားသည်ဟု ဇူလိုင်လ ၁၇ရက်နေ့ ကျင်းပပြုလုပ်သည့် ကချင်ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် ဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာခက်အောင် က ပြောသည်။
“Fortuna Metals ကုမ္မဏီကနေ သတ္တုတူးဖော်ရှာဖွေရေး (Exploration) ဘယ်နေရာမှာဘာရှိတယ်။ စမ်းသပ်လုပ်မယ်ဆိုပြီး ကျနော်တို့ ကချင်ပြည်နယ်အစိုးရကိုလာပြီးတော့ ရှင်းပြတယ်။ ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့က ပြည်ထောင်စုအစိုးရက သဘောတူမှ ဖြစ်မှာကို။ ဒါကို Facebook ပေါ်မှာ ဒီဟာတော့တရုတ်ကဘာဖြစ်တယ်။ ညာဖြစ်တယ်။ ရောင်းစားကုန်ပြီးပြောနေကြတာ တစ်ကယ်တော့ Fortuna Metals ကုမ္မဏီက မြန်မာနိုင်ငံအခြေစိုက်ဟုတ်တယ်။ စင်ကာပူမှာအခြေစိုက်တယ်။ သြစတေးလျ မှာ အခြေစိုက်တာဖြစ်တယ်။ ဒါကိုကျနော်တို့မရောင်းစားပါဘူး။ လက်ရှိလည်း သူတို့လုပ်မယ့်နေရာ ဧက ၁ သိန်းကျော်မှာ တောင်သူတွေရဲ့လယ်မြေတွေပါနေတဲ့အတွက် ရပ်ဆိုင်းထားပါပြီ။” ဟု ဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာခက်အောင် က အဆိုပါ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြောဆိုသည်။
Fortuna Metals ကုမ္မဏီက ၎င်းတို့လျှောက်ထားသည့် မြေနေရာတွင် ဒေသခံများ၏ လယ်ယာမြေ၊ ခြံများ ပါရှိနေသည့် အတွက် ရပ်နားစာကို လွန်ခဲ့သည့်လတွင် ကချင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ထံ စာတင်သွားကြောင်း ၎င်းကဆက်ပြောသည်။ https://www.bnionline.ne t/mm/news-74337
သျှမ်းပြည်တောင်ပိုင်း လွိုင်လင်မြို့နယ်ရှိ ဟိုခိုက်ရွာတွင် နေထိုင်သူများ စားနပ်ရိက္ခာအတွက် ခက်ခဲနေကြောင်း သတင်း ရရှိသည်။ ထို့ကြောင့် ဇူလိုင် ၂၀ ရက်က အဆိုပါ ဟိုခိုက်ရွာသားများအတွက် သျှမ်းပြည် စားနပ်ရိက္ခာ ထောက်ပံ့ရေး ကော်မတီမှ သွားရောက်လှူဒါန်းပြုပေးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ (လွိုင်လင်မြို့နယ်အတွင်း လွိုင်လင်နှင့် ပင်လုံကြားရှိ ဟိုခိုက်ရွာ သည် အနာကြီးရောဂါ ဖြစ်ပွါးနေသူနှင့် ၎င်းတို့မိသားစုများ နေထိုင်သည့်ရွာဖြစ်ပါသည်။)
“အနာကြီးကျေးရွာမှာ စားနပ်ရိက္ခာ အခက်အခဲ ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာ ကြားသိရတယ်။ ဒါကြောင့်မလို့ စားနပ်ရိက္ခာ အခက် အခဲဖြစ်နေတဲ့ဟာကို ကျနော်တို့ ကူညီထောက်ပံ့မယ်ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ သွားလှူရခြင်းဖြစ်တယ်။” ဟု စားနပ်ရိက္ခာ ထောက်ပံ့ရေး ကော်မတီ ဒုဥက္ကဌ ကိုတူးငယ် ကပြောသည်။ လွိုင်လင်မြို့နယ် ဟိုခိုက်ကျေးရွာအပြင် လွိုင်လင်မြို့ရှိ မသန်စွမ်း နှင့် သက်ကြီးရွယ်အို စခန်းများကိုလည်း စားနပ်ရိက္ခာများ လှူဒါန်းခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ “ကျနော်တို့ စားနပ်ရိက္ခာ ကိုတာ (ခွဲတန်းစနစ်) နဲ့ ဟိုခိုက်ကျေးရွာမှာ လူဦးရေ ၃၀၀ ကိုလှူဒါန်းခဲ့ပြီး လွိုင်လင် မသန်စွမ်း မှာ လူဦးရေ ၈၀ လှူဒါန်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။” ဟု ကိုတူးငယ် ကပြောသည်။
သွားရောက်လှူဒါန်းသည့် အဆိုပါ ခရီးစဉ်တွင် သျှမ်းပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့ဝင် လျှပ်စစ် နှင့် စွမ်းအင်ဝန်ကြီး ဦးစိုင်းရှန်တစ်လုံ၊ သျှမ်းပြည်နယ် ပြည်သူလူထု စားနပ်ရိက္ခာထောက်ပံ့ရေးကော်မတီအဖွဲ့များ ၊ သျှမ်းတောင် ပရဟိတ ညီနောင်များ ကွန်ရက် နှင့် ကမ္ဘောဇဘဏ် တို့ပါဝင်ကြောင်းသိရသည်။ သျှမ်းပြည်နယ် ပြည်သူလူထု စားနပ်ရိက္ခာထောက်ပံ့ရေး ကော်မတီသည် ကမ္ဘောဇဘဏ် နာယဂ ဥက္ကဌကြီး ဦးအောင်ကိုဝင်းမှ ဦးဆောင်ပြီး ကိုဗစ်-၁၉ အတွင်း စားနပ်ရိက္ခာ ခက်ခဲသည့် ဒေသများကို သွားရောက်လှူဒါန်းခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ https://burmese.shannews.org/archives/17628
၈။ တောင်သူတွေကို တရားစွဲဆိုမှု ပြင်ဆင်ချက်တက်တဲ့အမှုတွေက ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲမှာ တစ်ဆို့မှုဖြစ်စေနိုင်
လက်ရှိ ကယား(ကရင်နီ)ပြည်နယ်အတွင်းက တောင်သူအချို့ကို မြန်မာတပ်မတော်က ပြင်ဆင်ချက်တက်တဲ့အမှုတွေက ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲမှာ တစ်စုံတစ်ရာဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့ကိစ္စတွေမှာ တစ်ဆို့မှုဖြစ်စေနိုင်တယ်လို့ ကယားပြည်နယ် ငြိမ်းချမ်းရေး လေ့လာစောင့်ကြည့်သူတွေက ထောက်ပြပြောဆိုပါတယ်။
“ဒီကိစ္စရပ်က ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲမှာ လာပြီးသက်ရောက်တာပေါ့နော်။ အဲ့လိုရောက်လာတဲ့အခါမှာ အပြန်အလှန် ဆွေးနွေးမှုရဲ့ အားကောင်းဖို့အတွက် ပိုပြီးတော့မှအခက်အခဲဖြစ်စေတယ်။ အထူးသဖြင့်က ဆွေးနွေးညိုနိုင်းတဲ့အခါမှာ တစ်စုံတစ်ရာတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်ဖို့အတွက် ပိုပြီးတော့မှ အခက်အခဲဖြစ်စေတယ်ပေါ့နော်။ ဘာလို့လဲဆိုရင် တာကရေ ရည် ဖြေရှင်းရမယ့်ကိစ္စဖြစ်သော်လည်းပဲ နှစ်နာတဲ့ပြည်သူလူထုအတွက်က လတ်သလောလိုအပ်ချက်ဖြစ်နေတယ်။ ကြားထဲ မှာ ညိုနိုင်းဖြေရှင်းတဲ့အခါမှာ ငြိမ်းချမ်းရေးကို ရှေ့ဆက်သွားနိုင်ဖို့အတွက် တစ်ဆို့မှုဖြစ်တဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုလို့ ပြောလို့ ရတယ်ပေါနော်” လို့ ကိုမာတီယားကပြောပါတယ်။
အဲလို တောင်သူတွေကိုတရားစွဲဆိုတာဟာ ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲတွေမှာ တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက် နိုင်ငံရေးကိစ္စရပ်တွေ ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးကိစ္စရပ်တွေ ဖယ်ဒရယ်ကိစ္စရပ်တွေကို တွေ့ဆုံဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုလုပ်တဲ့အခါ ပြည်သူလူထုတွေရဲ့ တောင်းဆိုမှုတွေရှိလာတဲ့အတွက် ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ သက်ရောက်မှုရှိတယ်လို့ ၎င်းဆိုပါတယ်။
ကယားပြည်နယ် ၊ လွိုင်ကော်ခရိုင် ၊ လွိုင်ကော်မြို့နယ်ရှိ တပ်မတော်တပ်ရင်းဖြစ်ကြတဲ့ အမတ (၃၅၆)၊ ခမရ (၂၅၀) နှင့် ဒီးမော့ဆိုမြို့နယ်ရှိ အမတ (၃၆၀) တို့ က တောင်သူလယ်သမား ၃၇ ဦးနှင့် ကရင်နီပြည်တောင်သူ လယ်သမား သမဂ္ဂဝန်ထမ်း(၃)ဦး စုစုပေါင်း (၄၀) ဦးတို့ကို တပ်ရင်းမှ တာဝန်ရှိသူတွေက တရားစွဲဆိုခဲ့ပါတယ်။ https://www.b nionline.net/mm/news-74387
၉။ တောင်သူတွေနဲ့ တပ်မတော်ဖြစ်ပွားနေတဲ့ ပြဿနာကို အစိုးရက ဖြေရှင်းပေးဖို့ ပြည်နယ်အခြေစိုက် တိုင်းရင်းသား ပါတီတွေတောင်းဆို
တောင်သူတွေနဲ့ မြန်မာ့တပ်မတော်တို့ ဖြစ်ပွားနေတဲ့ ပြဿနာတွေကို ပြည်ထောင်စု အစိုးရသော်လည်းကောင်း ပြည်နယ် အစိုးရသော်လည်းကောင်း တစ်စုံတစ်ရာ ဖြေရှင်းပေးတာတို့ ညွန်ကြားချက်တွေထုတ်ပေးတာတို့ ဆောင်ရွက်သင့်တယ်လို့ ကယား(ကရင်နီ)ပြည်နယ် အခြေစိုက် တိုင်းရင်းသားပါတီတွေက တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ “အစိုးရတွေက ဒါချက်ချင်း လုပ်ဆောင်ပေးသင့်တဲ့အရာဖြစ်တယ်။ နောက်ထပ်အမှုမျိုးတွေမတက်လာအောင်လည်း ပြင်ဆင်တဲ့အနေနဲ့ ပြင်ဆင်တဲ့ အနေအထားဖြစ်အောင် ညွန်ကြားချက်တွေ ဥပဒေတွေပြင်တာတွေ တစ်စုံတစ်ရာ လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်။ ဒါပေမယ့်လက်ရှိ အစိုးရက လက်ရှိအခြေအနေအထိ ဘာတစ်ခုမှ မပြင်ထားဘူး။” လို့ ကယန်းအမျိုးသားပါတီ ဥက္ကဌ ခွန်းဘီထူးက ပြောပါတယ်။
ကယားပြည်နယ် ၊ လွိုင်ကော်ခရိုင် ၊ လွိုင်ကော်မြို့နယ်ရှိ တပ်မတော်တပ်ရင်းဖြစ်ကြတဲ့ အမတ (၃၅၆)၊ ခမရ (၂၅၀) နှင့် ဒီးမော့ဆိုမြို့နယ်ရှိ အမတ (၃၆၀) တို့ က တောင်သူလယ်သမား ၃၇ ဦးနှင့် ကရင်နီပြည်တောင်သူလယ်သမား သမဂ္ဂ ဝန်ထမ်း(၃)ဦး စုစုပေါင်း (၄၀) ဦးတို့ကို မြို့နယ် အသီးသီးက ထောင်ဒါဏ်နှင့် ငွေဒါဏ် အသီးသီးချမှတ်ထားခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။
မြို့နယ်တရားရုံးမှချမှတ်ထားတဲ့ ပြစ်ဒဏ်တွေကို မကျေနပ်လို့ဆိုပြီး တပ်မတော်တပ်ရင်းတွေကနေ ပြည်နယ်တရား လွှတ်တော် တရားရုံးကို ပြင်ဆင်ချက်ပြန်လည်တက်သည့်အကြောင်းအရင်းတွေကို သဘောမတူကြောင်းနှင့် အစိုးရဖက်မှ ဝင်ရောက်ဖြေရှင်းပေးဖို့အတွက် ကယားပြည်နယ် ဒီမိုကရက်တသ်စပါတီ (KySDP) နှင့် ကယန်းအမျိုးသားပါတီ(KNP) တို့က ဇူလိုင်လ ၁၅ ရက်နေ့မှာ ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ https://www.bnionline.net/mm/news-74307
ကရင်ပြည်နယ်၊ မြဝတီမြို့ အမှတ်(၃)ရပ်ကွက်၊ ငှက်ပျောတောရပ်၊ စကိတ်ကွင်းလမ်းရှိ နေအိမ်တစ်အိမ်တွင် ဇူလိုင်လ ၁၉ ရက်နေ့က ဗုံးသီး စနက်တံပြုတ်၍ ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားပြီး အမျိုးသားတစ်ဦး ထိခိုက်ဒဏ် ရာရရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ည ၈နာရီ ၄၅ မိနစ်အချိန်ခန့်တွင် အမှတ် (၃)ရပ်ကွက်ရှိ အိမ်ရှင် ကျော်မင်းဦးနှင့် သူ၏ မိတ်ဆွေ ကျော်ဝင်း (ခ) ထားဝယ်တို့ အရက်အတူသောက်နေစဉ် အဆိုပါ တစ်လမ်းတည်းတွင် နေထိုင်သူ မောင်မောင် နေလှိုင်း(ခ) ဒေးဒေးဆိုသူ ရောက်ရှိ လာပြီး ၎င်းတွင်ပါလာသော 92 လက်ပစ်ဗုံး ဝဲလက်ကိုင်လာရာ လက်တွင် မတော်တဆ စနက်တံပြုတ်၍ ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွား ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟု တာဝန်ရှိသူများက ပြောသည်။
ထိုသို့ပေါက်ကွဲမှုကြောင့် မောင်မောင်နေလှိုင်း(ခ) ဒေးဒေး ၏ ဝဲဘက်လက်နှင့် ရင်ဘတ်တို့တွင် ပေါက်ပြဲ သွေးထွက် ဒဏ်ရာများရရှိခဲ့ပြီး(မစိုးရိမ်ရ) မြဝတီ ခရိုင်ဆေးရုံကြီးသို့ တင်ပို့ကာ ဆေးဝါးကုသမှု ခံခဲ့ရကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပွားရာသို့ မြဝတီရှေ့တန်းရုံး ခြေလျင်တပ်ရင်း (ခလရ-၉၇)တပ်ရင်းမှူး ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီး အောင်ဆန်းဝင်း၊ မြဝတီခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး ဒုတိယရဲမှူးကြီး ပြည့်စုံ၊ မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး ရဲမှူးမြင့်ဌေးနှင့် ပူးပေါင်း အဖွဲ့များ ရောက်ရှိစစ်ဆေးကာ ဥပဒေနှင့်အညီ အရေးယူနိုင်ရန် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။ https://www.bnionline.net/mm/news-74372
၁၁။ ပအိုဝ်းအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် (PNO) ပါတီက အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲတွင် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ရှမ်း၊ ကယားနှင့် မွန်ပြည်နယ်တို့ရှိ ၂၂ မြို့နယ်၌ ၃၄ နေရာဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည်
ပအိုဝ်းအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်(PNO)ပါတီက ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ရှမ်း၊ ကယား နှင့် မွန်ပြည်နယ်တို့ရှိ ၂၂ မြို့နယ်၌ မဲဆန္ဒ နယ် ၃၄ နေရာ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
PNO ပါတီသည် ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းရှိ တောင်ကြီးခရိုင်၊ လွိုင်လင်ခရိုင်နှင့် လင်းခေးခရိုင်အတွင်း ၁၆ မြို့နယ်၌လည်း ကောင်း၊ ပအိုဝ်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ ပင်လောင်း၊ ဆီဆိုင်၊ ဟိုပုံး စသည့်သုံးမြို့နယ် ၌လည်းကောင်း၊ ကယားပြည်နယ် လွိုင်ကော် မြို့နယ်၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ထန်းတစ်ပင် မြို့နယ်၊ မွန်ပြည်နယ် သထုံမြို့နယ် စသည့် မြို့နယ်စုစုပေါင်း ၂၂ မြို့နယ်တွင် လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ၃၄ နေရာ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင် မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ အဆိုပါ ၃၄ နေရာတွင် အမျိုးသားလွှတ် တော် ငါးနေရာ၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုး နေရာ၊ ပြည်နယ်လွှတ်တော် ၁၈ နေရာ၊ တိုင်း ရင်းသားလူမျိုးရေးရာဝန်ကြီး နှစ်နေရာ စုစုပေါင်း ၃၄ နေရာ ဝင်ပြိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
“အများကြီးစိန်ခေါ်မှုရှိတာပေ့ါ။ လက်ရှိ COVID-19 ကာလဆိုတော့ လူစုလူဝေး လုပ်မရဘူးလေ။ ရှင်းရှင်းပြောရင် လူထုနဲ့ ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျတွေ့ပြီး ရွေးကောက်ပွဲအကြောင်း၊ ပြီးခဲ့တဲ့သက်တမ်းနှစ်ခုမှာ လုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ နိုင်ငံတော်အကျိုး၊ ဒေသ
အကျိုးအကြောင်းကို ပြည်သူတွေကို ချပြခွင့်မရှိဘူး။ အခက်အခဲပေ့ါ။ နောက်တစ်ခုက ၂၀၂၀ မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးကိစ္စ က ကော်မရှင်ကသာ သနာရေးဆိုင်ရာ အဆောက်အအုံတွေကို အသုံးပြုခွင့်မရှိဘူးဆိုတော့၊ အဲဒါ အခက်အခဲ၊ ဘာလို့ဆိုတော့ ပအိုဝ်းဒေသမှာ ကြီးကြီးမားမားဆိုရင် ဘုန်းကြီးကျောင်းပဲရှိတာလေ။ ဘုန်းကြီးကျောင်းဆိုတာ ပအိုဝ်းတွေအတွက် ဘာသာရေးတစ်ခုတည်းအတွက် ဆောက် လုပ်လှူဒါန်းထားတာမဟုတ်ဘူးပေါ့။ ရပ်ရေး ရွာရေး၊ ဖွံ့ဖြိုးရေး၊ လူမှုရေး အကုန်လုံး ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာပဲ လုပ်ကြတာကိုး။ ရွေးကောက် ပွဲစည်းရုံးရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ ဘုန်းကြီးကျောင်း တွေမှာ လုပ်လို့မရဘူးဆိုတော့ တော်တော် လေးကိုအခက်အခဲဖြစ်တာပေါ့။ ဘုန်းကြီးကျောင်းလုပ်လို့ မရရင် ဘယ်နားသွားလုပ်မလဲ၊ နေရာလည်းမရှိတော့ဘူး။ နောက် မိုးတွင်းကြီး။ ကိုးလပိုင်း၊ ၁၀ လပိုင်းဆိုတာ မိုး ကောင်းတဲ့အချိန်ကြီးလေ။ ဒါဟာ အဓိက အခက်အခဲ ဖြစ်တယ်။ ၂၀၁၅ ခုနှစ်တုန်းက ကော်မရှင်က အဲဒီလိုဥပဒေ ထုတ်ဖူးတယ်။ သို့သော်လည်းခြွင်းချက်အနေနဲ့ သက်ဆိုင်ရာ ကျောင်းထိုင်ဘုန်းကြီးခွင့်ပြုရင် လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့။ အဲဒီလိုဆိုတော့ ဘုန်းကြီးတွေက ဒေသအကျိုး၊ ပြည်နယ် အကျိုး၊ နိုင်ငံအကျိုး ဒီအကျိုးရှိတဲ့လုပ်ငန်းရပ်တွေဆိုရင် ဆရာတော်များက ခွင့်ပြုတယ်လေ။ ခုတော့ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်က ဘုန်းကြီးကျောင်းအတွက် ပြဿနာရှိသွားပြီ။ လူထုစည်းရုံးဖို့ ဆိုတာ ဘာမှ ဘယ်လိုလုပ်ရမှန်းတောင်မသိတော့ဘူး”ဟု ပအိုဝ်းအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် PNO ပါတီ အ ထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ချုပ် ဦးခွန်သိန်းဖေက ပြောကြားသည်။
ပအိုဝ်းအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်(PNO) ပါတီသည် ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ် မေလတွင် ပါတီ ကို စတင်ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့ပြီး ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲတွင် ၁၀ နေရာ၊ ၂၀၁၅ ခုနှစ် အထွေထွေရွေးကောက် ပွဲတွင် ၁၀ နေရာ အနိုင်ရရှိခဲ့ ကြောင်း သိရသည်။ https://news-eleven.com/article/183563
အစိုးရနဲ့ အပစ်မရပ်ရသေးတဲ့ မြောက်ပိုင်းအဖွဲ့တွေကြား နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေ အမြန်ဆုံးစတင်လိုကြောင်း မြောက်ပိုင်း သုံးဖွဲ့က ဒီနေ့ ဇူလိုင် ၂၁ ရက်နေ့မှာ ကမ်းလှမ်းလိုက်ပါတယ်။
ကျင်းပဖို့ ကြန့်ကြာနေတဲ့ ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံကိုလည်း ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်အန္တရာယ်ကို ထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့ အခြေအနေအောက်မှာ ပြန်လည်ကျင်းပမယ်ဆိုရင် “ဝ” တပ်ဖွဲ့ ဦးဆောင်တဲ့ FPNCC ရဲ့ လမ်းညွှန်မှုနဲ့ တက်ရောက်ဖို့ ဆန္ဒရှိကြောင်း ကိုးကန့် MNDAA၊ ပလောင် PSLF နဲ့ AA ရက္ခိုင့်တပ်မတော်တို့က ကြေညာချက်ထုတ်လိုက်တာပါ။
၂၁ ရာစုပင်လုံညီလာခံ တက်ရောက်ဖို့ မြောက်ပိုင်းအဖွဲ့တွေကို ဖိတ်ဖို့ အစီအစဉ်ရှိလားလို့ ဇူလိုင် ၁၇ ရက်နေ့က သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲမှာ သမ္မတရုံး ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဦးဇော်ဌေး ကို RFA က မေးမြန်းရာမှာတော့ ၂၁ ရာစု ပင်လုံညီလာခံကျင်းပ မယ့် သြဂုတ်လဆန်းမှာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကာကွယ် ထိန်းချုပ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကို အစိုးရ လုပ်ဆောင်နေရဆဲဖြစ်ကြောင်း၊ ညီလာခံကို တက်ရောက်ဖို့ မြောက်ပိုင်းအဖွဲ့တွေဟာ ပြည်ပကနေ လေကြောင်းနဲ့ ဝင်ရောက်လာရမှာဖြစ်တဲ့အတွက် အခက်အခဲတွေရှိကြောင်း၊ အခက်အခဲတွေ ရှိတဲ့ကြားကနေ အစိုးရက ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်နေဆဲဖြစ်ကြောင်း ဖြေကြားထားပါ တယ်။ https://www.facebook.com/rfaburmese
ချင်းပြည်နယ် ပလက်ဝမြို့နယ် တုန်းမဝကျေးရွာသား ဦးလှကျော်ကို AA အဖွဲ့က ဖမ်းဆီးပြီး သတ်ဖြတ်ခဲ့တာကို ပြင်းထန်စွာ ကန့်ကွက်ရှုတ်ချကြောင်း ခူမီးချင်းမျိုးနွယ်စုများရေးရာ ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းရေးကောင်စီ KACC က ဒီနေ့ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။
AA အဖွဲ့အနေနဲ့ ချင်းတိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်မဟုတ်ဘဲ ပလက်ဝမှာ အခြေချတဲ့အပြင် အရပ်သားတွေကို ဖမ်းဆီး သတ်ဖြတ်တာတွေလုပ်နေတာကို လုံးဝကန့်ကွက်ရှုတ်ချကြောင်းနဲ့ နောက်ထပ်ဒါမျိုးတွေမလုပ်ဖို့ KACC အဖွဲ့ ပြောရေးဆို ခွင့်ရှိသူ မိုင်နန်းဝေက ပြောပါတယ်။ သေဆုံးသူအသက် ၆၂ နှစ်အရွယ် ဦးလှကျော်ဟာ ဇွန်လ ၅ ရက်နေ့က ကျေးရွာ အတွက် ဆန်ရှာဖို့ ပိချောင်း၊ ငသရိုင်းဘက်ကို သွားရောက်ရာမှာ AA အဖွဲ့က ဖမ်းဆီးသွားတာလို့ ဒေသခံတွေ ပြောပြချက် အရ သိရတယ်လို့ ထုတ်ပြန်ချက်မှာ ပြောထားပါတယ်။ KACC အဖွဲ့အနေနဲ့ ဦးလှကျော် လွတ်မြောက်ရေးအတွက် ကြိုးစား ခဲ့ပေမယ့် ဇူလိုင်လ ၁၇ ရက်နေ့မှာ သူ့အလောင်းကို မိသားစုဝင်တွေက တွေ့ရှိပြီး ဇူလိုင်လ ၁၉ ရက်နေ့မှာ သင်္ဂြိုဟ်ခဲ့ တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ https://www.facebook.com/rfaburmese
ကရင်ပြည်နယ်၊ ဖာပွန်ဒေသခံ ရွာသူအမျိုးသမီးတစ်ဦးကို တပ်မတော်သားနှစ်ဦးက ဇူလိုင်လ ၁၆ရက်နေ့တွင် သေနတ်ဖြင့် ပစ်သတ်ခဲ့မှုအပေါ် စုံစမ်းဖော်ထုတ် အရေးယူပေးရန် ပြည်နယ် ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရပ်စဲရေးဆိုင်ရာ ပူးတွဲစောင့်ကြည့်ရေး ကော်မတီ(JMC-S)ထံသို့ KNU-ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး၏ ကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်ဖွဲ့-KNLA တပ်မဟာ (၅) ဇူလိုင်လ ၁၈ရက် နေ့စွဲဖြင့် တိုင်ကြားစာပေးပို့လိုက်သည်။
မူတရော်(ဖာပွန်)ခရိုင်၊ ဒွယ်လိုးမြို့နယ်၊ ပိုလိုးထာကျေးရွာရှိ အသက် (၄၀)အရွယ် နော်မုနော် ဆိုသူကို ခိုးသွီးထာ (လှဂွန်းပျို)ကျေးရွာအခြေစိုက်စခန်း အမှတ်(၈) စစ်ကွပ်ကဲရေးဌာနချုပ်(စကခ) လက်အောက်ခံ၊ ခြေလျင်တပ်ရင်း (ခလရ-၄၀၉)မှ တပ်သားနှစ်ဦးဖြစ်သော မောင်သန်းမိုးလွင်နှင့် မောင်အေးမင်းသူ တို့က နေအိမ်၌ပင် အကြောင်းမဲ့ပစ်သတ်ခဲ့ပြီး လက်ဝတ်ရတနာများကို ချွတ်ယူသွားကြောင်း ယင်းတိုင်ကြားစာ၌ ဖော်ပြထားသည်။
ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးစဉ်ကာလအတွင်း ယခုလို လုပ်ရပ်များသည် တစ်နိုင်ငံလုံးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှု ရပ်စဲရေး သဘောတူစာချုပ်(NCA)ပါ သဘောတူညီချက်များကို ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ရာရောက်ပြီး ၎င်းဖြစ်ရပ်အပေါ် KNLA တပ်မဟာ (၅)အနေဖြင့် အပြင်းအထန် ကန့်ကွက်ကြောင်းနှင့် ဖြစ်စဉ်အပေါ် စုံစမ်းဖော်ထုတ် အရေးယူသွားရမည် ဖြစ်ကြောင်း တိုင်ကြားလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ https://www.bnionline.net/mm/news-74366
ရခိုင်ပြည်နယ် ၊ အမ်းမြို့ပေါ်တွင်ရောက်ရှိနေသည့် ချင်းစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူများအတွက် ရိက္ခာဆန်နှင့် နေထိုင်စရာ ယာယီအဆောင်များအရေးတကြီးလိုအပ်နေသည်ဟု ချင်းစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူများ အရေးပေါ်ကူညီရေးနှင့် ပြန်လည်ထူ ထောင်ရေး ကော်မတီ(RRCCI) ဥက္ကဌ ဆလိုင်းအိုက်ဇက်ခင်ကပြောသည်။
“လောလောဆယ်တော့ စခန်း (၂) ခုထဲမှာ လူဦး ၁၅၃၄ ဦး ရှိတယ် ချင်းရော ရခိုင်ရော ရှိတယ် ။ အများစုက ချင်းလူမျိုး များတယ်။ စခန်းအပြင်ဖက်မှာ ကိုယ့်အစီအစဉ်နဲ့ကို ကိုယ်ထူကိုယ်ထနေကြတဲ့ သူတွေရှိတယ် သူတို့က ၃၀၀၀ လောက်ရှိ တယ်၊ စာရင်းကောက်တာ ၁၉၆၀ ဦးစာရင်းရတယ်၊ ကျန်တာတော့ ကောက်နေဆဲပဲ၊ အဓိကသူတို့လိုတာက စားစရာဆန် ၊ နေစရာ ၊ လုံခြုံရေး သွားရေးလာရေးခက်တယ် ၊ ကျန်းမာရေး နဲ့ပညာရေးတွေ အခက်အခဲရှိတာပေါ့ ” ဟု (RRCCI) ဥက္ကဌ ဆလိုင်းအိုက်ဇက်ခင်က ပြောသည်။
ယခုလက်ရှိ အမ်းမြို့ပေါ်တွင် စစ်ဘေးရှောင်စခန်းအမှတ် (၁)နှင့် အမှတ် (၂) ဟူ၍ စခန်းနှစ်ခုရှိပြီး အစိုးရဖက်မှ စခန်းအတွင်းရှိ စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူများကိုတာဝန်ယူကာ စခန်းတွင်နေရာထိုင်ခင်းမလုံလော က်မှုကြောင့် စခန်းအပြင်ဖက် တွင် ကိုယ့်အစီစဉ်နှင့်ကိုယ်နေထိုင်ကြသော စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူများကိုမူ တာဝန်မယူပေးသည့်အတွက် အခက်ကြုံတွေ့ နေကြရသည်ဟု ၎င်းကဆက်ပြောသည်။
“အစိုးရဖက်ကတော့ စခန်း(၂)ခုထဲမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေကိုတော့ တာဝန်ယူပေးတာပေါ့ ၊ စခန်းအပြင်ဖက်မှာရှိတဲ့ သူတွေကို တော့ အစိုးရကဖက်တော့ တာဝန်မယူဘူး၊ စခန်းအပြင်ဖက်မှာရှိသူတွေကို လူမူရေး ၊ ဘာသာရေးအဖွဲ့အစည်းတွေက ဝိုင်းကူညီတာပေါ့၊ နောက်ထပ် စခန်းတခုလိုတယ်လို့ ပြောတယ် ၊ ကျွန်တော်တို့ကလည်း အဲ့ဒီကိစ္စကို စခန်းတခုထပ်ရ အောင် ပြောပေးနေတယ် ” ဟု ဆလိုင်းအိုက်ဇက်ခင်ကပြောသည်။ https://www.bnionline.net/mm/news-74377
၂၀၂၀ ခုနှစ်အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကို နိုဝင်ဘာလတွင်ကျင်းပမည်ဖြစ်သောကြာင့် ဇွန်လ ၂၆ရက်နေ့က ထုတ်ပြန်လိုက် သည့် (Code Of Conduct) ကို လိုက်နာကြမည့်နိုင်ငံရေးပါတီများနှင့် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများအတွက် စောင့်ကြည့် ကြပ်မတ်ရေး ကော်မတီ တစ်ရပ်ဖွဲ့စည်းသွားရန် နိုင်ငံရေးပါတီ ၅၀ ကျော်က ဆွေးနွေးနေကြသည်။
ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က ထုတ်ပြန်သော နိုင်ငံရေးပါတီများနှင့် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ လိုက်နာရန်ကျင့်ဝတ်ကို သဘောတူညီလက်မှတ်ရေးထိုးပြီးဖြစ်သည့် အာဏာရ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါဝင်သော ပါတီများ အစုအဖွဲ့က CoC ကြပ်မတ်ရေးကော်မတီကို ဇူလိုင် ၁၇ မှစတင်၍ ရန်ကုန်မြို့ မလီယာဟိုတယ်တွင် ဆွေးနွေးနေကြခြင်းဖြစ်သည်။
“ဒါက ကျင့်ဝတ်ပဲ၊ ရွေးကောက်ပွဲကြီးပျက်သွားတဲ့အထိတော့မဖြစ်လောက်ဘူး။ ပျက်သွားမယ်ဆို ရာဇာဝတ်ကြောင်းလာ မယ်။ တရားမကြောင်းအရင်လာမယ်။ မတရားမဲ့ပြုကျင့်မှုတို့ ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ ပြစ်မှုတွေလာမယ်။ အခုကဒီအဆင့်မျိုး မရောက်ပါဘူး။ ကျင့်ဝတ်ဆိုတာပြည်သူတွေကသိမယ်။ ပါတီတွေက ကျင့်ဝတ်သိပ်က္ခာရှိသလားမရှိသလား ဘယ်ပါတီ ကတော့ ကျင့်ဝတ်သိက္ခာစောင့်ထိန်းတယ်။ ရွေးကောက်ပွဲကျင့်ဝတ် အဲဒါပါပဲ “ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်၏ အရန်ဗဟို ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်သူ ဦးကျော်ဟိုးက ပြောသည်။ https://www.bnionline.net/mm/news-74332
သျှမ်းပြည်တောင်ပိုင်း ဆီဆိုင်မြို့နယ်ရှိ တပ်သိမ်းမြေနှင့် ပတ်သက်ပြီး အစားထိုး ပြန်ပေးမည့်ကိစ္စသည့် တိုင်းရင်းသား အချင်းချင်းကြား ပြဿနာ ဖြစ်နိုင်ကြောင်း မြေသိမ်းခံရသည့် တောင်သူများက ပြောဆိုလိုက်သည်။
အဆိုပါပြောဆိုမှုသည် ဇူလိုင် (၂၀)ရက်တွင် တောင်ကြီးမြို့ ထိန်သာဟိုတယ်တွင် ပြုလုပ်သည့် မြေသိမ်းဆည်းခံရသည့် တောင်သူလယ်သမားများ၏ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် တောင်သူများက ပြောဆိုလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
ဆီဆိုင်မြို့နယ် တပ်သိမ်းခံရသည့် မြေများ အစားထိုး ပြန်ပေးရာတွင် သျှမ်းတိုင်းရင်းသားတို့ နေထိုင်ရာ ဒေသရှိ ကုန်းမြင့် မြေများကို ဖော်ပြီးပြန်ပေးမည်ဖြစ်သဖြင့် တိုင်းရင်းသားအချင်းချင်း ပြသာနာဖြစ်အောင် လုပ်ပေးလိုက်သည့် သဘောဖြစ် ကြောင်း လယ်ယာမြေသိမ်းခံရသည့် ပအိုဝ်းတောင်သူ ခွန်ချစ်ထွေးက ပြောသည်။
“တိုင်းရင်းသားတွေ တစ်စုနဲ့ တစ်စု အန္တရာယ်ဖြစ်အောင် ပြဿနာဖြစ်အောင် လုပ်ပေးတာလား။ ကျနော်တို့က ရချင်တယ်လို့ ပြောလိုက်ရင် ရေရှည် ပြသာနာတွေ ဖြစ်သွားနိုင်တယ်” ဟု ခွန်ချစ်ထွေး က ဆိုသည်။
အစားထိုး ပြန်ပေးမည့် မြေယာများသည် ကုန်းမြင့်မြေများဖြစ်ပြီး သျှမ်းတိုင်းရင်းသားများ ဘိုးဘွားစဉ်ဆက် စိုက်ပျိုး ထိန်းသိမ်းထားသည့် သစ်တောများဖြစ်ပြီး၊ ထိုဖော်ထားသည့်မြေများကို ပအိုဝ်းတောင်သူများလက်ခံလိုက်ပါက ပအိုဝ်း နှင့် သျှမ်း နောက်ဆက်တွဲပြဿနာဖြစ်လာနိုင်ကြောင်း ခွန်ချစ်ထွေး က ထပ်လောင်းပြောသည်။ https://www.bnionline.net/ mm/news-74379
ကယားပြည်နယ်တခုလုံးမှာ ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ရမယ့် အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်းနဲ့ အထက်တန်းကျောင်းခွဲပေါင်း ၅၆ ကျောင်းရှိတဲ့အနက် ၁၈ ကျောင်းသာ ဖွင့်လှစ်နိုင်သေးတယ်လို့ ကယားပြည်နယ် ပညာရေးမှူး ဦးလူစီယားနိုက ဒီဗွီဘီကို ပြောပါတယ်။
အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်းတွေကို ဇူလိုင် ၂၁ ရက်နေ့မှာ ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ရ မှာဖြစ်ပေမယ့် ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ် ထိန်းချုပ်ရေး လမ်းညွန်ချက်အတိုင်း သတ်မှတ်ထားတဲ့ အဆင့်တွေရ (A) အဆင့် ဝင်တဲ့ကျောင်းတွေကိုသာ ဖွင့်ခွင့်ပြုတာ ဖြစ်ကြောင်း ပညာရေးမှူး ဦးလူစီယားနိုက ပြောပါတယ်။ “ကျနော်တို့ ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေး လမ်းညွှန်ချက် အတိုင်း သတ်မှတ်ထားတဲ့ စံအတိုင်း ကနဦးစစ်ဆေးတဲ့အခါမှာ A အဆင့်ဝင်တဲ့ကျောင်းတွေကို အရင်ဆုံး ဖွင့်ခွင့်ပြု လိုက်တာပေါ့။ ကယားပြည်နယ်အနေနဲ့က A အဆင့်ဝင်တဲ့ အခြေခံပညာကျောင်း ၁၈ ကျောင်းရယ်၊ ကိုယ်ပိုင်ကျောင်း ၄ ကျောင်းပေါ့။” ဒီကနေ့ပြန်လည်ဖွင့်ခွင့်ရတဲ့ အခြေခံပညာကျောင်းတွေကတော့ လွိုင်ကော်မြို့နယ်မှာ ၄ ကျောင်း၊ ဒီးမော့ဆို မြို့နယ်မှာ ၁၃ ကျောင်း၊ ဘောလခဲမြို့နယ် ရွာသစ်မှာ ၁ ကျောင်းရှိပြီး Z ရှားတော၊ ဖားဆောင်း နဲ့ မယ်စဲ့မြို့နယ် တွေမှာ တော့ ဖွင့်ခွင့်မရသေးပါဘူး။ “မရှိသေးပါဘူးဆိုတာက ကျနော်တို့က ကနဦးစစ်ဆေးချက်ဆိုတာရှိ တယ်။ ကနဦး check list နဲ့သွားစစ်တဲ့အခါမှာ ပထမဆုံးစစစ်ကတည်းက A အဆင့်ဝင်တဲ့ကျောင်းကို ကနဦး ဖွင့်ခွင့်ပေး ထားပါတယ်။ အဲတော့ လိုအပ်ချက်လေးတွေ အနည်းအကျဉ်းရှိတဲ့ကျောင်းကို B အဆင့် သတ်မှတ်တယ်။ B လို့သတ်မှတ်တဲ့ကျောင်းတွေကို လိုအပ် ချက်လေးတွေ ဖြည့်ဆည်းပေးပြီးတော့ A အဆင့်ဖြစ်အောင် ကျနော်တို့ ပြန်လုပ်ပေးရတာဖြစ်ပါတယ်။” လို့ ဦးလူစီယားနိုက ပြောပါတယ်။
ကျန်ရှိနေတဲ့ကျောင်းတွေကိုလည်း အချိန်တိုအတွင်း အားလုံးနီးပါ ဆက်လက်ဖွင့်လှစ်သွားမှာ ဖြစ်တယ်လို့လည်း ပြည်နယ် ပညာရေးမှူးက ပြောပါတယ်။ ဖွင့်လှစ်နိုင်တဲ့ ကျောင်းတွေတွေမှာလည်း ဆရာ၊ ဆရာမတွေ၊ ကျောင်းသူ/ကျောင်းသား တွေ ကျောင်းတွင်းဝင်ရောက်လာပါက ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ သတ်မှတ် ညွှန်ကြားချက်နဲ့အညီ ကိုယ်အပူချိန် တိုင်းတာ၊ လက်ဆေးတာ၊ (၆)ပေအကွာ ကျောင်းတက်နိုင်ရေးနဲ့ စာသင်ခန်းအတွင်း စနစ်တကျ သင်ကြားပို့ချနိုင်ရေး ဆောင်ရွက်ထား ရှိထားပါတယ်။ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ပညာသင်နှစ် ကယားပြည်နယ်မှာ အခြေခံပညာအထက်တန်း ကျောင်းအဆင့် ၅၆ ကျောင်း၊ ကိုယ်ပိုင် အထက်တန်းကျောင်း (၆)ကျောင်း စုစုပေါင်း ၆၂ ကျောင်းရှိပြီး Grade-10 တက်မယ့် ကျောင်းသား ကျောင်းသူ ၄၀၀၀ ကျော်နဲ့ Grade-11 တက်ရမယ့် ကျောင်းသား/ကျောင်းသူ ၄၀၀၀ ကျော် ရှိကြောင်းသိရပါတယ်။ http://burmese.dvb.no/archives/400740
ရခိုင်ပြည်နယ် တောင်ကုတ်မြို့နယ် ရွာမရဲကင်းစခန်းမှာ တာဝန်ကျနေတဲ့ ရဲတပ်သား သက်ထွဋ်အောင်ဟာ ဇူလိုင်လ ၂၀ ရက်နေ့ညနေက သူကိုင်ဆောင်ထားတဲ့သေနတ်နဲ့ သူ့ကိုယ်သူ ပစ်ခတ်သေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့ တောင်ကုတ်မြို့နယ် ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးက ဒီဗွီဘီကို ပြောပါတယ်။
တောင်ကုတ်မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး ရဲမှူးသန်းနိုင် က “ည ၆ နာရီလောက်မှာ ရွာမ ရဲကင်းစခန်းက ရဲတပ်သား သက်ထွဋ်အောင် ဆိုတဲ့သူပေါ့၊ သူက စိတ်ကရောကင်ခြောက်ခြား ဖြစ်ပြီးတော့ သူ့ကိုထုတ်ပေးထားတဲ့သေနတ်နဲ့ ကိုယ့်ဟာကိုသတ်သေသွား တာပေါ့”လို့ ပြောပါတယ်။ အဆိုပါ ရဲတပ်သား သက်ထွဋ်အောင်သေဆုံးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး တောင်ကုတ်မြို့မရဲစခန်းမှာ သေမှုသေခင်း ဖွင့်လှစ်ပြီးစစ်ဆေးနေတယ်လို့ သိရပါတယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့ ၁ နှစ်ကျော်လောက်ကလည်း တောင်ကုတ်မြို့မရဲစခန်းမှ တာဝန်ထမ်းဆောင်နေ တဲ့ စခန်းမှူးတစ်ဦးဟာလည်း သတ်သေမှုတခုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ http://burmese.dvb.no/archives/400735
၁။ KBC ခေါငျးဆောငျ Rev. Dr. Hkalam Samson ရဲ့ KIO လိုငျဇာမှ မွဈကွီးနား အပွနျလမျး စဈဆေးခံရ
၂။ နျောမုနျော ပဈသတျခံရမှု တရားမြှတမှုရရှိရေး ကရငျအဖှဲ့မြား ဝိုငျးဝနျးဖိအားပေးရနျ KNU Concerned Group တိုကျတှနျး
၃။ မွဝတီမွို့ Quarantine စခနျး ၂ ခုမှ ရှပွေ့ောငျးမွနျမာလုပျသား ၅၀ ဦးခနျ့ အစာအဆိပျသငျ့မှု ဖွဈပှား
၄။ ရှထိုးဇှပျကြေးရှာ ရေးဘေးသငျ့ပွညျသူမြားအတှကျ အကူအညီလိုအပျနေ
၅။ ကယားပွညျနယျ ဖားဆောငျးတှငျ KNP သုံးနရော ဝငျပွိုငျမညျ
၆။ ခေါငျလနျဖူးဒသေ သတ်တုတူးဖျောမညျ့အစီစဉျကို Fortuna Metals ကုမ်ပဏီဘကျက ရပျနားထား
၇။ ကိုဗဈ-၁၉ ကာလ လှိုငျလငျမွို့နယျကြေးလကျဒသေခံမြား စားနပျရိက်ခာ ခကျခဲ
၈။ တောငျသူတှကေို တရားစှဲဆိုမှု ပွငျဆငျခကျြတကျတဲ့အမှုတှကေ ငွိမျးခမျြးရေးဆှေးနှေးပှဲမှာ တဈဆို့မှုဖွဈ စနေိုငျ
၉။ တောငျသူတှနေဲ့ တပျမတျောဖွဈပှားနတေဲ့ ပွဿနာကို အစိုးရက ဖွရှေငျးပေးဖို့ ပွညျနယျအခွစေိုကျ တိုငျးရငျးသား ပါတီတှေ တောငျးဆို
၁၀။ မွဝတီမွို့တှငျ လကျပဈဗုံး ပေါကျကှဲမှုဖွဈပှားပွီး ၁ ဦး ဒဏျရာရ
၁၁။ ပအိုဝျးအမြိုးသားအဖှဲ့ခြုပျ (PNO) ပါတီက အထှထှေရှေေးကောကျပှဲတှငျ ပဲခူးတိုငျးဒသေကွီး၊ ရှမျး၊ ကယားနှငျ့ မှနျပွညျနယျတို့ရှိ ၂၂ မွို့နယျ၌ ၃၄ နရောဝငျရောကျယှဉျပွိုငျမညျ
၁၂။ နိုငျငံရေးဆှေးနှေးပှဲတှေ အမွနျဆုံးစတငျဖို့ မွောကျပိုငျး သုံးဖှဲ့ ကမျးလှမျး
၁၃။ ပလကျဝဒသေခံ ရှာသားတဈဦးကို AA က သတျဖွတျခဲ့တာ ကနျ့ကှကျကွောငျး KACC ထုတျပွနျ
၁၄။ ရှာသူအမြိုးသမီးတဈဦး ပဈသတျခံရမှုအပျေါ KNLA ကနျ့ကှကျ၊ စုံစမျးဖျောထုတျအရေးယူရနျ JMC-S သို့ တိုငျကွား
၁၅။ အမျးမွိုပျေါရှိ ခငျြးစဈဘေးရှောငျပွညျသူမြား ရိက်ခာနှငျ့ ယာယီအဆောငျမြားလိုအပျနေ
၁၆။ ရှေးကောကျပှဲကငျြ့ဝတျ CoC စောငျ့ကွညျ့ကွပျမတျရေးကျောမတီဖှဲ့စညျးမညျ
၁၇။ ဆီဆိုငျကုနျးမွငျ့မွေ ကို အစားထိုးပေးပါက တိုငျးရငျးသားအခငျြးခငျြးပွဿနာဖွဈလာနိုငျ
၁၈။ ကယားပွညျနယျတှငျ အထကျတနျးကြောငျး ၁၈ ကြောငျးသာ ဖှငျ့လှဈ
၁၉။ တောငျကုတျမွို့နယျ၌ ရဲတပျဖှဲ့ဝငျ ၁ ဦး ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ သနေတျဖွငျ့ ပဈခတျ အဆုံးစီရငျ
ကခငျြနှဈခွငျးခရဈယာနျအဖှဲ့ခြုပျ KBC ခေါငျးဆောငျ Rev. Dr. Hkalam Samson သညျ ကခငျြလှတျလပျရေးအဖှဲ့ KIO လိုငျဇာမွို့မှ မွဈကွီးနားမွို့သို့ ပွနျလာခြိနျ Nam San Yang ကြေးရှာတှငျ တပျမတျောမှ ပိတျပငျတားဆီးမှုမြားရှိခဲ့သျော လညျး ပွနျလညျထှကျခှာလာနိုငျပွီဟု သိရသညျ။
ကခငျြစဈရှောငျမြားနရေပျပွနျနိုငျရေးလုပျဆောငျနသေော KHCC အဖှဲ့ခေါငျးဆောငျဖွဈသူ Rev.Dr. Hkalam Samson သညျ ယခငျက တပျမတျောနှငျ့ အစိုးရကို အကွောငျးကွားမှုရှိခဲ့သျောလညျး ယခုအခေါကျ မလုပျနိုငျသဖွငျ့ စဈဆေးခံရခွငျး ဖွဈသညျဟု ဆိုသညျ။“အရငျကတော့ KHCC အနနေဲ့သှားရငျ အစိုးရနဲ့ တပျမတျောကို အကွောငျးကွားတယျ။ ဒီတဈခေါကျ တော့ အလုပျမြားသှားတော့ မလုပျနိုငျတော့ဘူး။ ဒီတော့ ပွနျအကွောငျးကွားပွီးမှ ထှကျလာနိုငျခဲ့တယျ။ အားလုံးအဆငျပွေ ပွီ။” ဟု ဆရာဆမျဆှနျက ပွောသညျ။
Rev.Dr.Hkalam Samson နှငျ့ KHCC အဖှဲ့သညျ လှနျခဲ့သညျ့အပတျ နပွေညျတျောတှငျ ပွညျထောငျစုလူကယျပွနျ ဝနျကွီးတို့နှငျ့တှဆေုံ့ပွီး ကခငျြစဈရှောငျမြားနရေပျပွနျနိုငျရေးအတှကျ တတိယအကွိမျမွောကျသှားရောကျတှဆေုံ့ခဲ့သညျ ဟု သိရသညျ။ ထို့နောကျ မွဈကွီးနားမှ ကခငျြလှတျလပျရေးအဖှဲ့ KIO ဌာနခြုပျ လိုငျဇာမွို့သို့ ဇူလိုငျ ၁၆ ရကျနတှေ့ငျ အစညျးအဝေးအတှကျ သှားရောကျခဲ့ခွငျးဖွဈသညျဟု သိရသညျ။ “အဲဒီပိတျမိတဲ့နမှေ့ာဘဲ တိုငျးမှူးကိုအကွောငျးကွား၊ ပွညျနယျ အစိုးရကို အကွောငျးကွာပွီး နားလညျအောငျပွောပွတယျ။” ဟု ထပျမံပွောဆိုသညျ။ https://burmese.kachin news.com/2020/07/20/kbc%e1%80 %81%e1%80%b1%e1%80%ab%e1%80%84
တပျမတျောသားနှဈဦး၏ ပဈသတျခွငျးခံခဲ့ရသညျ့ မူတွျော(ဖာပှနျ)ဒသေခံ အမြိုးသမီး နျောမုနျော သဆေုံးမှု တရားမြှတမှုရ ရှိရေးအတှကျ ကရငျလကျနကျကိုငျအဖှဲ့အစညျးမြားအပါအဝငျ သကျဆိုငျရာ ကရငျအဖှဲ့အစညျးမြား အားလုံးဝိုငျးဝနျးပါဝငျ ဖိအားပေးရနျလိုအပျကွောငျး KNU Concerned Group က သဘောထားထုတျပွနျကာ တိုကျတှနျးလိုကျသညျ။
ပွီးခဲ့သညျ့ ဇူလိုငျလ ၁၆ ရကျနကေ့ ဖာပှနျ ခရိုငျ၊ ဒှယျလိုးမွို့နယျ၊ ပိုလိုးထာကြေးရှာနေ အသကျ (၄၀)နှဈ အရှယျ နျောမု နျောဆိုသူ အမြိုးသမီးကို တပျမတျောသားနှဈဦးမှ ပဈသတျခဲ့ပွီး လကျဝတျရတနာမြားကို ခြှတျယူသှားခဲ့မှုအပျေါ အပွငျး အထနျကနျ့ကှကျရှုတျခကြွောငျး အဆိုပါ အဖှဲ့က ဆိုသညျ။ အဖှဲ့၏ ပွောခှငျ့ရ ပဒိုနျောစီဖိုးရာစိနျက “ကရငျအမြိုးသား တှရေဲ့ လုံခွုံရေးအတှကျ အကာအကှယျပေးနပေါတယျဆိုတဲ့ KNU အပါအဝငျ ကရငျလကျနကျကိုငျအဖှဲ့အစညျးတှေ၊ ကရငျ နိုငျငံရေးပါတီတှေ အရပျဖကျအဖှဲ့ အစညျးတှကေော ကရငျပွညျသူတဈရပျလုံးအနနေဲ့က ဒီဖွဈစဉျအပျေါမှာ အမှနျတရားပျေါ ပေါကျလာဖို့နဲ့ ကြူးလှနျသူတှကေို အရေးယူ ဆောငျရှကျဖို့က အတူတကှ ပူးပေါငျးဝိုငျးဝနျးဖို့လိုတယျ”ဟု ကအေိုငျစီသို့ ပွောသညျ။
တိုငျးရငျးသားဒသေမြား၌ မွနျမာ့တပျမတျော၏ အလားတူ ရာဇဝတျမှု ကြူးလှနျမှုမြားသညျ စဈရေးလကျနကျသဖှယျ နှဈပေါငျးကွာရှညျစှာ ကငျြ့သုံး ကြူးလှနျလာခဲ့ရာ ပွညျတှငျးတရားစီရငျမှုစနဈဖွငျ့ အရေးယူခွငျးသညျ ထိရောကျမှုမရှိနိုငျ ကွောငျးလညျး KNU Concerned Group က ပွောဆိုသညျ။“ကမြတို့အနနေဲ့ Amnesty International (AI) နဲ့ Human Right Watch တို့လို နိုငျငံတကာ အဖှဲ့အစညျးတှကေို ဒီကိစ်စတှကေို လာရောကျစုံစမျးစဈဆေးဖို့ တောငျးဆိုလိုတာပေါ့။ ဘာဖွဈလဲဆိုတော့ ပွညျတှငျးက အစိုးရ အနနေဲ့က ဒီကိစ်စတှအေတှကျ တရားမြှတမှုရရှိဖို့ လုပျနိုငျစှမျးမရှိဘူးဆိုတာ ကမြတို့ အရငျကဖွဈစဉျတှမှော သိမွငျခဲ့ပွီးဖွဈတယျ။ သူတို့ ကျောမတီဖှဲ့စုံစမျးတာတှေ အရေးယူတာတှကေ တရားမြှတမှုမရှိဘူး။” ဟု ပဒိုနျောစီဖိုးရာစိနျက ဆကျပွောသညျ။
မွနျမာ့တပျမတျော၏ မတရားညှငျးပနျးနှိပျစကျမှုမြား၊ အကွောငျးမဲ့ သတျဖွတျ ခွငျးမြား၊ အဓမ်မပွုကငျြ့မှုမြား အပွငျ ပွညျသူ လူထုမြား၏ ပစ်စညျးဥစ်စာမြားကို အတငျးအဓမ်မရယူခွငျးမြား ရပျတနျ့သှားနိုငျရေး နှငျ့ ထိရောကျစှာအရေးယူ တားဆီးဟနျ့ တားနိုငျရေးအတှကျ Amnesty International (AI) နှငျ့ Human Right Watch ကဲ့သို့သော နိုငျငံတကာ အဖှဲ့အစညျးမြား မှ ဝငျရောကျစုံစမျးရနျ KNU Concerned Group ၏ ယနေ့ ထုတျပွနျခကျြ၌ တောငျးဆိုထားခွငျးဖွဈသညျ။ http://kicnews.org/20 20/07/%e1%80%b1%e1 %80%94%e1%80%ac%e1% 80%b9%e1%80%99%e1%
ကရငျပွညျနယျ မွဝတီမွို့ အမှတျ(၄)ရပျကှကျတှငျ ဖှငျ့လှဈထားသညျ့ Quarantine စခနျး ၂ ခုမှ ထိုငျးပွနျမွနျမာ လုပျသား ၅၀ ဦးခနျ့မှာ အစာအဆိပျသငျ့မှုဖွဈပှားပွီး မွဝတီခရိုငျပွညျသူ့ဆေးရုံတှငျ ဆေးဝါးကုသမှု ခံယူနရေ သညျဟု သိရသညျ။
ဇူလိုငျလ ၁၉ ရကျ ညဦးပိုငျးက ရှမွေဝတီဈေးသဈ Quarantine စခနျးမှ ထိုငျးပွနျမွနျမာလုပျသား ၄၆ ဦးနှငျ့ ကြောကျလုံး ကွီးစခနျးမှ ၃ ဦး စုစုပေါငျး ၄၉ ဦးခနျ့မှာ အစာအဆိပျသငျ့မှုဖွဈပှားသညျ့ ရောဂါလက်ခဏာမြား ဖွဈ၍ မွဝတီခရိုငျ ပွညျသူ့ ဆေးရုံကွီးသို့ ပို့ဆောငျပေးရသညျဟု တာဝနျရှိသူမြားက ပွောသညျ။ ရှမွေဝတီဈေးသဈ Quarantine စခနျးမှာ Volunteer အဖွဈ ကနျြးမာရေးစောငျ့ကွညျ့ပေးလကျြရှိသော ဒေါကျ တာ စောဌေးမွငျ့က“ ဒီလို အစာအဆိပျသငျ့မှုဖွဈပှား တာကို ဇူလိုလ ၁၉ ရကျနေ့ ၊ ညနေ ၅ နာရီခနျ့မှာ မူးဝေ အော့အနျပွီး ဝမျးလြှောဝမျးပကျြဖွဈကွသူမြား လာရောကျ ပွောကွားလို့ စတငျသိရှိရပွီး ဆေးရုံသို့ပို့ဆောငျ၍ ဆေးဝါကူသမှု ခံယူစခေဲ့ပါတယျ။ စိုးရိမျစရာ အခွအေနတေော့ မရှိပါဘူး။ ပွနျလညျ သကျသာ၍စခနျးသို့ ပွနျ လညျနထေိုငျကွသူတှလေညျးရှိပါတယျ” ဟု ပွောသညျ။
မွဝတီမွို့ ပွညျသူ့ဆေးရုံသို့ ရောကျရှိလာသညျ့ လူနာမြားထဲတှငျ ရှမွေဝတီဈေး Quarantine စခနျးမှ လူနာ အမြားစုသညျ ညနစော စားပွီးခြိနျတှငျ အစာအဆိပျသငျ့ လက်ခဏာ ဖွဈပှားခွငျးဖွဈသညျ။ သို့သျော ကြောကျလုံးကွီး စခနျးမှ ရောကျရှိ လာသူ သုံးဦးသညျ ညနစော မစားရသေးသျောလညျး အစာအဆိပျသငျ့ လက်ခဏာ ဖွဈပှားသညျ့အတှကျ အစာအဆိပျသငျ့ မှုသညျ မညျသညျ့အတှကျကွောငျ့ ဖွဈသညျကို ကနျြးမာရေးဌာနက စိစဈဆဲဖွဈကွောငျး မွဝတီမွို့မှ ပွညျနယျလှတျတျော ကိုယျစားလှယျ ဦးသနျ့ဇငျအောငျက ပွောသညျ။
၎င်းငျးတို့အား ပွညျနယျနှငျ့တိုငျးအလိုကျ အစိုးရခငျြးခြိတျဆကျ၍ ပို့ဆောငျပေးမှုမြားရှိသလို မွဝတီနယျစပျတှငျ Quarantine စခနျး ၈ ခု ခနျ့ဖှငျ့ထားပွီး ၂၁ ရကျထားရှိကာ ကနျြးမာရေးစောငျ့ကွညျ့မှုမြား ပွုလုပျလကျြရှိ ကွောငျး သိရသညျ။ လကျရှိ ရှမွေဝတီဈေး Quarantine စခနျးတှငျ ထိုငျးပွနျမွနျမာလုပျသား ၅၀ဝ ဦးခနျ့ ရှိကွောငျးသိရသညျ။ http://kicnews.org/2 020/07/%e1%80%bb%e1%80%99%e1%80%9d%e1%80%90%e1%80%ae%e1%
ကခငျြပွညျနယျ ဟူးကောငျးလီဒိုလမျးမပျေါရှိ ရှထိုးဇှပျကြေးရှာတှငျ မိုးသညျးထနျစှာရှာသှနျးမှုကွောငျ့ မိုးကောငျးခြောငျးရေ မွငျ့တကျလာပွီး ကြေးရှာအိမျခွေ ၂၀ဝ ခနျ့ရဘေေးသငျ့နကွေောငျး ကြေးရှာအုပျခြူပျရေးမှူးထံမှ သိရသညျ။
ဇူလိုငျ ၁၉ ရကျညတှငျ မိုးသညျးထနျစှာ ရှာသှနျးမှုကွောငျ့ ယနေ့ နံနကျပိုငျး ၂ နာရီ မှ ၃ နာရီအတှငျး ရစေတငျဝငျရောကျ လာခွငျးဖွဈပွီး နအေိမျ၊ စာသငျကြောငျးနှငျ့ စဈရှောငျစခနျးတို့တှငျ ရပွေညျ့သှားသဖွငျ့ စဈပွေးဒုက်ခသညျမြားကိုလညျး ဘုရားကြောငျးဝငျးသို့ ရှပွေ့ောငျးနရောခပြေးထားသညျဟု ဆိုသညျ။
“ စာသငျကြောငျးတှငျး ဆရာမတှနေတေဲ့ နရော အကုနျရပွေညျ့နတေယျ။ ဆရာမတှကေို ကုနျးဘကျ ရမေရောကျတဲ့နရော ရှထေ့ားတယျ။ စဈရှောငျစခနျးလညျး ရပွေညျ့သှားတော့ နဂိုစဈရှောငျတှနေတေဲ့နရောတှလေညျး ဘုရားကြောငျးတှငျးတော့ ဟုတျတယျ။ ဘုရားကြောငျးကနှဈခုရှိတဲ့အထဲ ရမေရောကျတဲ့ကုနျးဘကျက ဘုရားကြောငျးဆီရှပွေီ့း နရောခထြားပေးတယျ။”ဟု ရှထိုးဇှပျဒသေခံ ဆရာမုနျဂတျြဒှဲ ကပွောသညျ။ရဘေေးသငျ့နသေော စဈရှောငျပွညျသူမြားနှငျ့ ရှာသားမြားအတှကျ ကူညီရေးနှငျ့ ကယျဆယျရေးမြား မရောကျရှိသေးကွောငျး ၎င်းငျးကဆကျလကျပွောဆိုသညျ။ “အခုတော့ ရဘေေးသငျ့ အိမျခွတှေကေို ရမေရောကျတဲ့ ကုနျးဘကျကိုရှထေ့ားဆဲဖွဈတယျ။ ရကွေီးတဲ့အထဲ သူတို့ဆနျတှကေအစ ပါသှားပွီပေါ့။ ရကေသြှားတဲ့အခြိနျထိစောငျ့ပွီး ရကေသြှားတော့မှ ကိုယျ့နအေိမျ ကိုယျပွနျနဖေို့စီစဉျနတော သူတို့အတှကျ စားစရာ ကအစ ကူညီထောကျပံ့မှုတှလေိုအပျလိမျ့မယျ။” ဟု ရှထိုးဇှပျ ကြေးရှာအုပျခြူပျရေးမှူး ဦးနျောဒီးက ပွောသညျ။
ရှဒူးဇှပျကြေးရှာတှငျ လှနျခဲ့သော ၄ နှဈတုနျးခနျ့က ရကွေီးခဲ့သျောလညျး ယခုနှဈရကွေီးမှုသညျ ယခငျနှဈမြားထကျ ပိုဆိုး ရှားကွောငျးသိရသညျ။ https://burmese.kachinnews.com/2020/07/20/%e1%80%9b%e1%80%be%1%e1%
ကယားပွညျနယျ (ကရငျနီပွညျ)၊ ဘျောလခဲခရိုငျ၊ ဖားဆောငျးမွို့တှငျ ကရငျအမြိုးသားပါတီ(KNP)က လာမညျ့ ၂၀၂၀ ရှေးကောကျပှဲတှငျ သုံးနရော ဝငျပွိုငျသှားမညျဟု ဖားဆောငျးမွို့နယျ၊ ဥက်ကဋ်ဌ စောဘီဝမျးက ဇူလိုငျ ၂၀ ရကျတှငျ ကအေိုငျစီ သို့ ပွောသညျ။
ဖားဆောငျးတှငျ KNPက အမြိုးသားလှတျတျောကိုယျစားလှယျ တဈဦး၊ ပွညျသူ့လှတျတျောကိုယျစားလှယျ တဈနရောနှငျ့ ပွညျနယျလှတျတျောအတှကျ တဈနရောဝငျပွိုငျသှားမညျဖွဈကာ ဝငျပွိုငျမညျ့ကိုယျစားလှယျ လောငျးမြားသညျ အမြိုးသား မြား ဖွဈသညျဟု KNP ဖားဆောငျးမွို့နယျ အလုပျအမှုဆောငျအဖှဲ့နှငျ့ ပါတီဌာနခြုပျ ထိပျပိုငျးခေါငျးဆောငျမြားက ပွောသညျ။“ကနြျောတို့ မွို့နယျမှာ တခြို့က ပါတီနိုငျငံရေးနဲ့ နှဈ ၇၀ လောကျစိမျးနတောရှိတယျ။ တခြို့ကလညျး ကရငျပါ တီတှနေဲ့ စိမျးနတောလညျး ရှိတယျ။ ဘာဖွဈလို့လဲဆိုတော့ ပါတီကွီးတှနေဲ့ ပွညျနယျအခွစေိုကျပါတီတှေ လညျးရှိတော့ ကရငျ အမြိုးသား ပါတီနဲ့ စိမျးနတောမြိုးတော့ရှိတယျ။ သုံးနရောလုံးအတှကျ အကောငျးဆုံးကွိုး စားမယျ။ ရမယျလို့ မြှျောမှနျး ထားတယျ” ဟု စောဘီဝမျးက ပွောသညျ။
ကရငျအမြိုးသားပါတီအနဖွေငျ့ ကယားပွညျနယျ၊ ဖားဆောငျးမွို့နယျတှငျ မွို့နယျ အလုပျအမှုဆောငျအဖှဲ့ ရုံးဖှငျ့လှဈခွငျးကို ၂၀၁၉ ခုနှဈ၊ ဒီဇငျဘာ ၂၄ ရကျနတှေ့ငျ ပွုလုပျခဲ့ပွီးနောကျ ယခုလို ရှေးကောကျပှဲဝငျရနျ ညှိနှိုငျးဆုံးဖွတျခဲ့ခွငျးဖွဈသလို အထှထှေရှေေးကောကျပှဲမြားတှငျ ကယားပွညျနယျ၌ ကရငျပါတီတို့ ပထမ ဦးဆုံးအကွိမျ ဝငျရှေးခံခွငျးလညျးဖွဈသညျ။
ကယားပွညျနယျ၊ ဘျောလခဲခရိုငျ၊ ဖားဆောငျးမွို့နယျ၌ အထှထှေအေုပျခြုပျရေးဦးစီးဌာနမှ ထုတျပွနျသညျ့ ၂၀၁၉ ခုနှဈထိ စားရငျးမြားအရ စုစုပေါငျးလူဦးရေ ၂၃,၄၈၅ ဦးရှိကာ ကရငျလူမြိုး ၁၄,၈၆၃ ဦးရှိပွီး စုစုပေါငျး မွို့နယျလူဦးရေ၏ ၆၃ ဒသမ ၂၆ (၆၃.၂၆)ရာခိုငျနှုနျးဖွဈကွောငျး သိရသညျ။ ထို့အပွငျ၂၀၁၅ ခုနှဈမဲ စာရငျး အရ ဖားဆောငျးတှငျ မဲဆန်ဒရှငျ ၁၂,၄၆၉ ဦးရှိကွောငျး ရှေးကောကျပှဲကျောမရှငျက ထုတျပွနျထားသညျ။ http://kicnews.org/2020/07/%e1%80%80%e1%80 %9a%e1%80%ac%e1%80%b8%e1%80%bb%e1%
ကခငျြပွညျနယျ ပူတာအိုခရိုငျ ခေါငျလနျဖူးမွို့နယျရှိ မွဧေက ၃သိနျးကြျောတှငျ သတ်တု၊ ကွေးနီတူးဖျောမညျ့အစီစဉျကို ရပျဆိုငျးထားရနျ Fortuna Metals Company ကစာတငျထားသညျဟု ဇူလိုငျလ ၁၇ရကျနေ့ ကငျြးပပွုလုပျသညျ့ ကခငျြပွညျနယျ အစိုးရအဖှဲ့သတငျးစာရှငျးလငျးပှဲတှငျ ဝနျကွီးခြုပျဒေါကျတာခကျအောငျ က ပွောသညျ။
“Fortuna Metals ကုမ်မဏီကနေ သတ်တုတူးဖျောရှာဖှရေေး (Exploration) ဘယျနရောမှာဘာရှိတယျ။ စမျးသပျလုပျမယျဆိုပွီး ကနြျောတို့ ကခငျြပွညျနယျအစိုးရကိုလာပွီးတော့ ရှငျးပွတယျ။ ဒါပမေယျ့ကနြျောတို့က ပွညျထောငျစုအစိုးရက သဘောတူမှ ဖွဈမှာကို။ ဒါကို Facebook ပျေါမှာ ဒီဟာတော့တရုတျကဘာဖွဈတယျ။ ညာဖွဈတယျ။ ရောငျးစားကုနျပွီးပွောနကွေတာ တဈကယျတော့ Fortuna Metals ကုမ်မဏီက မွနျမာနိုငျငံအခွစေိုကျဟုတျတယျ။ စငျကာပူမှာအခွစေိုကျတယျ။ သွစတေးလြ မှာ အခွစေိုကျတာဖွဈတယျ။ ဒါကိုကနြျောတို့မရောငျးစားပါဘူး။ လကျရှိလညျး သူတို့လုပျမယျ့နရော ဧက ၁ သိနျးကြျောမှာ တောငျသူတှရေဲ့လယျမွတှေပေါနတေဲ့အတှကျ ရပျဆိုငျးထားပါပွီ။” ဟု ဝနျကွီးခြုပျဒေါကျတာခကျအောငျ က အဆိုပါ သတငျးစာရှငျးလငျးပှဲပွောဆိုသညျ။
Fortuna Metals ကုမ်မဏီက ၎င်းငျးတို့လြှောကျထားသညျ့ မွနေရောတှငျ ဒသေခံမြား၏ လယျယာမွေ၊ ခွံမြား ပါရှိနသေညျ့ အတှကျ ရပျနားစာကို လှနျခဲ့သညျ့လတှငျ ကခငျြပွညျနယျဝနျကွီးခြုပျထံ စာတငျသှားကွောငျး ၎င်းငျးကဆကျပွောသညျ။ https://www.bnionline.net/mm/news-74337
သြှမျးပွညျတောငျပိုငျး လှိုငျလငျမွို့နယျရှိ ဟိုခိုကျရှာတှငျ နထေိုငျသူမြား စားနပျရိက်ခာအတှကျ ခကျခဲနကွေောငျး သတငျး ရရှိသညျ။ ထို့ကွောငျ့ ဇူလိုငျ ၂၀ ရကျက အဆိုပါ ဟိုခိုကျရှာသားမြားအတှကျ သြှမျးပွညျ စားနပျရိက်ခာ ထောကျပံ့ရေး ကျောမတီမှ သှားရောကျလှူဒါနျးပွုပေးခဲ့ကွောငျး သိရသညျ။ (လှိုငျလငျမွို့နယျအတှငျး လှိုငျလငျနှငျ့ ပငျလုံကွားရှိ ဟိုခိုကျရှာ သညျ အနာကွီးရောဂါ ဖွဈပှါးနသေူနှငျ့ ၎င်းငျးတို့မိသားစုမြား နထေိုငျသညျ့ရှာဖွဈပါသညျ။)
“အနာကွီးကြေးရှာမှာ စားနပျရိက်ခာ အခကျအခဲ ဖွဈနတေယျဆိုတာ ကွားသိရတယျ။ ဒါကွောငျ့မလို့ စားနပျရိက်ခာ အခကျ အခဲဖွဈနတေဲ့ဟာကို ကနြျောတို့ ကူညီထောကျပံ့မယျဆိုတဲ့ ရညျရှယျခကျြနဲ့ သှားလှူရခွငျးဖွဈတယျ။” ဟု စားနပျရိက်ခာ ထောကျပံ့ရေး ကျောမတီ ဒုဥက်ကဌ ကိုတူးငယျ ကပွောသညျ။ လှိုငျလငျမွို့နယျ ဟိုခိုကျကြေးရှာအပွငျ လှိုငျလငျမွို့ရှိ မသနျစှမျး နှငျ့ သကျကွီးရှယျအို စခနျးမြားကိုလညျး စားနပျရိက်ခာမြား လှူဒါနျးခဲ့ကွောငျး သိရသညျ။ “ကနြျောတို့ စားနပျရိက်ခာ ကိုတာ (ခှဲတနျးစနဈ) နဲ့ ဟိုခိုကျကြေးရှာမှာ လူဦးရေ ၃၀ဝ ကိုလှူဒါနျးခဲ့ပွီး လှိုငျလငျ မသနျစှမျး မှာ လူဦးရေ ၈၀ လှူဒါနျးနိုငျခဲ့ပါတယျ။” ဟု ကိုတူးငယျ ကပွောသညျ။
သှားရောကျလှူဒါနျးသညျ့ အဆိုပါ ခရီးစဉျတှငျ သြှမျးပွညျနယျ အစိုးရအဖှဲ့ဝငျ လြှပျစဈ နှငျ့ စှမျးအငျဝနျကွီး ဦးစိုငျးရှနျတဈလုံ၊ သြှမျးပွညျနယျ ပွညျသူလူထု စားနပျရိက်ခာထောကျပံ့ရေးကျောမတီအဖှဲ့မြား ၊ သြှမျးတောငျ ပရဟိတ ညီနောငျမြား ကှနျရကျ နှငျ့ ကမ်ဘောဇဘဏျ တို့ပါဝငျကွောငျးသိရသညျ။ သြှမျးပွညျနယျ ပွညျသူလူထု စားနပျရိက်ခာထောကျပံ့ရေး ကျောမတီသညျ ကမ်ဘောဇဘဏျ နာယဂ ဥက်ကဌကွီး ဦးအောငျကိုဝငျးမှ ဦးဆောငျပွီး ကိုဗဈ-၁၉ အတှငျး စားနပျရိက်ခာ ခကျခဲသညျ့ ဒသေမြားကို သှားရောကျလှူဒါနျးခဲ့ကွောငျး သိရသညျ။ https://burmese.shannews.org/archives/17628
၈။ တောငျသူတှကေို တရားစှဲဆိုမှု ပွငျဆငျခကျြတကျတဲ့အမှုတှကေ ငွိမျးခမျြးရေးဆှေးနှေးပှဲမှာ တဈဆို့မှုဖွဈစနေိုငျ
လကျရှိ ကယား(ကရငျနီ)ပွညျနယျအတှငျးက တောငျသူအခြို့ကို မွနျမာတပျမတျောက ပွငျဆငျခကျြတကျတဲ့အမှုတှကေ ငွိမျးခမျြးရေးဆှေးနှေးပှဲမှာ တဈစုံတဈရာဆုံးဖွတျခကျြခတြဲ့ကိစ်စတှမှော တဈဆို့မှုဖွဈစနေိုငျတယျလို့ ကယားပွညျနယျ ငွိမျးခမျြးရေး လလေ့ာစောငျ့ကွညျ့သူတှကေ ထောကျပွပွောဆိုပါတယျ။
“ဒီကိစ်စရပျက ငွိမျးခမျြးရေးဆှေးနှေးပှဲမှာ လာပွီးသကျရောကျတာပေါ့နျော။ အဲ့လိုရောကျလာတဲ့အခါမှာ အပွနျအလှနျ ဆှေးနှေးမှုရဲ့ အားကောငျးဖို့အတှကျ ပိုပွီးတော့မှအခကျအခဲဖွဈစတေယျ။ အထူးသဖွငျ့က ဆှေးနှေးညိုနိုငျးတဲ့အခါမှာ တဈစုံတဈရာတော့ဆုံးဖွတျခကျြခနြိုငျဖို့အတှကျ ပိုပွီးတော့မှ အခကျအခဲဖွဈစတေယျပေါ့နျော။ ဘာလို့လဲဆိုရငျ တာကရေ ရညျ ဖွရှေငျးရမယျ့ကိစ်စဖွဈသျောလညျးပဲ နှဈနာတဲ့ပွညျသူလူထုအတှကျက လတျသလောလိုအပျခကျြဖွဈနတေယျ။ ကွားထဲ မှာ ညိုနိုငျးဖွရှေငျးတဲ့အခါမှာ ငွိမျးခမျြးရေးကို ရှဆေ့ကျသှားနိုငျဖို့အတှကျ တဈဆို့မှုဖွဈတဲ့အကွောငျးအရာတဈခုလို့ ပွောလို့ ရတယျပေါနျော” လို့ ကိုမာတီယားကပွောပါတယျ။
အဲလို တောငျသူတှကေိုတရားစှဲဆိုတာဟာ ငွိမျးခမျြးရေးဆှေးနှေးပှဲတှမှော တဈဖကျနဲ့တဈဖကျ နိုငျငံရေးကိစ်စရပျတှေ ပွနျလညျသငျ့မွတျရေးကိစ်စရပျတှေ ဖယျဒရယျကိစ်စရပျတှကေို တှဆေုံ့ဆှေးနှေးညှိနှိုငျးမှုလုပျတဲ့အခါ ပွညျသူလူထုတှရေဲ့ တောငျးဆိုမှုတှရှေိလာတဲ့အတှကျ ငွိမျးခမျြးရေးနဲ့ သကျရောကျမှုရှိတယျလို့ ၎င်းငျးဆိုပါတယျ။
ကယားပွညျနယျ ၊ လှိုငျကျောခရိုငျ ၊ လှိုငျကျောမွို့နယျရှိ တပျမတျောတပျရငျးဖွဈကွတဲ့ အမတ (၃၅၆)၊ ခမရ (၂၅၀) နှငျ့ ဒီးမော့ဆိုမွို့နယျရှိ အမတ (၃၆၀) တို့ က တောငျသူလယျသမား ၃၇ ဦးနှငျ့ ကရငျနီပွညျတောငျသူ လယျသမား သမဂ်ဂဝနျထမျး(၃)ဦး စုစုပေါငျး (၄၀) ဦးတို့ကို တပျရငျးမှ တာဝနျရှိသူတှကေ တရားစှဲဆိုခဲ့ပါတယျ။ https://www.b nionline.net/mm/news-74387
တောငျသူတှနေဲ့ မွနျမာ့တပျမတျောတို့ ဖွဈပှားနတေဲ့ ပွဿနာတှကေို ပွညျထောငျစု အစိုးရသျောလညျးကောငျး ပွညျနယျ အစိုးရသျောလညျးကောငျး တဈစုံတဈရာ ဖွရှေငျးပေးတာတို့ ညှနျကွားခကျြတှထေုတျပေးတာတို့ ဆောငျရှကျသငျ့တယျလို့ ကယား(ကရငျနီ)ပွညျနယျ အခွစေိုကျ တိုငျးရငျးသားပါတီတှကေ တောငျးဆိုလိုကျပါတယျ။ “အစိုးရတှကေ ဒါခကျြခငျြး လုပျဆောငျပေးသငျ့တဲ့အရာဖွဈတယျ။ နောကျထပျအမှုမြိုးတှမေတကျလာအောငျလညျး ပွငျဆငျတဲ့အနနေဲ့ ပွငျဆငျတဲ့ အနအေထားဖွဈအောငျ ညှနျကွားခကျြတှေ ဥပဒတှေပွေငျတာတှေ တဈစုံတဈရာ လုပျဖို့လိုအပျတယျ။ ဒါပမေယျ့လကျရှိ အစိုးရက လကျရှိအခွအေနအေထိ ဘာတဈခုမှ မပွငျထားဘူး။” လို့ ကယနျးအမြိုးသားပါတီ ဥက်ကဌ ခှနျးဘီထူးက ပွောပါတယျ။
ကယားပွညျနယျ ၊ လှိုငျကျောခရိုငျ ၊ လှိုငျကျောမွို့နယျရှိ တပျမတျောတပျရငျးဖွဈကွတဲ့ အမတ (၃၅၆)၊ ခမရ (၂၅၀) နှငျ့ ဒီးမော့ဆိုမွို့နယျရှိ အမတ (၃၆၀) တို့ က တောငျသူလယျသမား ၃၇ ဦးနှငျ့ ကရငျနီပွညျတောငျသူလယျသမား သမဂ်ဂ ဝနျထမျး(၃)ဦး စုစုပေါငျး (၄၀) ဦးတို့ကို မွို့နယျ အသီးသီးက ထောငျဒါဏျနှငျ့ ငှဒေါဏျ အသီးသီးခမြှတျထားခဲ့ပွီးဖွဈပါတယျ။
မွို့နယျတရားရုံးမှခမြှတျထားတဲ့ ပွဈဒဏျတှကေို မကနြေပျလို့ဆိုပွီး တပျမတျောတပျရငျးတှကေနေ ပွညျနယျတရား လှတျတျော တရားရုံးကို ပွငျဆငျခကျြပွနျလညျတကျသညျ့အကွောငျးအရငျးတှကေို သဘောမတူကွောငျးနှငျ့ အစိုးရဖကျမှ ဝငျရောကျဖွရှေငျးပေးဖို့အတှကျ ကယားပွညျနယျ ဒီမိုကရကျတသျစပါတီ (KySDP) နှငျ့ ကယနျးအမြိုးသားပါတီ(KNP) တို့က ဇူလိုငျလ ၁၅ ရကျနမှေ့ာ ထုတျပွနျလိုကျပါတယျ။ https://www.bnionline.net/mm/news-74307
ကရငျပွညျနယျ၊ မွဝတီမွို့ အမှတျ(၃)ရပျကှကျ၊ ငှကျပြောတောရပျ၊ စကိတျကှငျးလမျးရှိ နအေိမျတဈအိမျတှငျ ဇူလိုငျလ ၁၉ ရကျနကေ့ ဗုံးသီး စနကျတံပွုတျ၍ ပေါကျကှဲမှုဖွဈပှားပွီး အမြိုးသားတဈဦး ထိခိုကျဒဏျ ရာရရှိခဲ့ကွောငျး သိရသညျ။
ည ၈နာရီ ၄၅ မိနဈအခြိနျခနျ့တှငျ အမှတျ (၃)ရပျကှကျရှိ အိမျရှငျ ကြျောမငျးဦးနှငျ့ သူ၏ မိတျဆှေ ကြျောဝငျး (ခ) ထားဝယျတို့ အရကျအတူသောကျနစေဉျ အဆိုပါ တဈလမျးတညျးတှငျ နထေိုငျသူ မောငျမောငျ နလှေိုငျး(ခ) ဒေးဒေးဆိုသူ ရောကျရှိ လာပွီး ၎င်းငျးတှငျပါလာသော 92 လကျပဈဗုံး ဝဲလကျကိုငျလာရာ လကျတှငျ မတျောတဆ စနကျတံပွုတျ၍ ပေါကျကှဲမှုဖွဈပှား ခဲ့ခွငျးဖွဈသညျဟု တာဝနျရှိသူမြားက ပွောသညျ။
ထိုသို့ပေါကျကှဲမှုကွောငျ့ မောငျမောငျနလှေိုငျး(ခ) ဒေးဒေး ၏ ဝဲဘကျလကျနှငျ့ ရငျဘတျတို့တှငျ ပေါကျပွဲ သှေးထှကျ ဒဏျရာမြားရရှိခဲ့ပွီး(မစိုးရိမျရ) မွဝတီ ခရိုငျဆေးရုံကွီးသို့ တငျပို့ကာ ဆေးဝါးကုသမှု ခံခဲ့ရကွောငျး သိရသညျ။
အဆိုပါ ဖွဈစဉျဖွဈပှားရာသို့ မွဝတီရှတေ့နျးရုံး ခွလေငျြတပျရငျး (ခလရ-၉၇)တပျရငျးမှူး ဒုတိယဗိုလျမှူးကွီး အောငျဆနျးဝငျး၊ မွဝတီခရိုငျရဲတပျဖှဲ့မှူး ဒုတိယရဲမှူးကွီး ပွညျ့စုံ၊ မွို့နယျရဲတပျဖှဲ့မှူး ရဲမှူးမွငျ့ဌေးနှငျ့ ပူးပေါငျး အဖှဲ့မြား ရောကျရှိစဈဆေးကာ ဥပဒနှေငျ့အညီ အရေးယူနိုငျရနျ ဆောငျရှကျလကျြရှိကွောငျး သိရသညျ။ https://www.bnionline.net/mm/news-74372
ပအိုဝျးအမြိုးသားအဖှဲ့ခြုပျ(PNO)ပါတီက ပဲခူးတိုငျးဒသေကွီး၊ ရှမျး၊ ကယား နှငျ့ မှနျပွညျနယျတို့ရှိ ၂၂ မွို့နယျ၌ မဲဆန်ဒ နယျ ၃၄ နရော ဝငျရောကျယှဉျပွိုငျမညျဖွဈကွောငျး သတငျးရရှိသညျ။
PNO ပါတီသညျ ရှမျးပွညျနယျတောငျပိုငျးရှိ တောငျကွီးခရိုငျ၊ လှိုငျလငျခရိုငျနှငျ့ လငျးခေးခရိုငျအတှငျး ၁၆ မွို့နယျ၌လညျး ကောငျး၊ ပအိုဝျးကိုယျပိုငျအုပျခြုပျခှငျ့ရဒသေ ပငျလောငျး၊ ဆီဆိုငျ၊ ဟိုပုံး စသညျ့သုံးမွို့နယျ ၌လညျးကောငျး၊ ကယားပွညျနယျ လှိုငျကျော မွို့နယျ၊ ပဲခူးတိုငျးဒသေကွီး ထနျးတဈပငျ မွို့နယျ၊ မှနျပွညျနယျ သထုံမွို့နယျ စသညျ့ မွို့နယျစုစုပေါငျး ၂၂ မွို့နယျတှငျ လှတျတျော ကိုယျစားလှယျ ၃၄ နရော ဝငျရောကျယှဉျပွိုငျ မညျဖွဈကွောငျး သိရသညျ။ အဆိုပါ ၃၄ နရောတှငျ အမြိုးသားလှတျ တျော ငါးနရော၊ ပွညျသူ့လှတျတျော ကိုး နရော၊ ပွညျနယျလှတျတျော ၁၈ နရော၊ တိုငျး ရငျးသားလူမြိုးရေးရာဝနျကွီး နှဈနရော စုစုပေါငျး ၃၄ နရော ဝငျပွိုငျမညျဖွဈကွောငျး သိရသညျ။
“အမြားကွီးစိနျချေါမှုရှိတာပေါ့။ လကျရှိ COVID-19 ကာလဆိုတော့ လူစုလူဝေး လုပျမရဘူးလေ။ ရှငျးရှငျးပွောရငျ လူထုနဲ့ ကိုယျတိုငျကိုယျကတြှပွေီ့း ရှေးကောကျပှဲအကွောငျး၊ ပွီးခဲ့တဲ့သကျတမျးနှဈခုမှာ လုပျဆောငျခဲ့တဲ့ နိုငျငံတျောအကြိုး၊ ဒသေအကြိုးအကွောငျးကို ပွညျသူတှကေို ခပြွခှငျ့မရှိဘူး။ အခကျအခဲပေါ့။ နောကျတဈခုက ၂၀၂၀ မဲဆှယျစညျးရုံးရေးကိစ်စ က ကျောမရှငျကသာ သနာရေးဆိုငျရာ အဆောကျအအုံတှကေို အသုံးပွုခှငျ့မရှိဘူးဆိုတော့၊ အဲဒါ အခကျအခဲ၊ ဘာလို့ဆိုတော့ ပအိုဝျးဒသေမှာ ကွီးကွီးမားမားဆိုရငျ ဘုနျးကွီးကြောငျးပဲရှိတာလေ။ ဘုနျးကွီးကြောငျးဆိုတာ ပအိုဝျးတှအေတှကျ ဘာသာရေးတဈခုတညျးအတှကျ ဆောကျ လုပျလှူဒါနျးထားတာမဟုတျဘူးပေါ့။ ရပျရေး ရှာရေး၊ ဖှံ့ဖွိုးရေး၊ လူမှုရေး အကုနျလုံး ဘုနျးကွီးကြောငျးမှာပဲ လုပျကွတာကိုး။ ရှေးကောကျ ပှဲစညျးရုံးရေးနဲ့ပတျသကျလို့ ဘုနျးကွီးကြောငျး တှမှော လုပျလို့မရဘူးဆိုတော့ တျောတျော လေးကိုအခကျအခဲဖွဈတာပေါ့။ ဘုနျးကွီးကြောငျးလုပျလို့ မရရငျ ဘယျနားသှားလုပျမလဲ၊ နရောလညျးမရှိတော့ဘူး။ နောကျ မိုးတှငျးကွီး။ ကိုးလပိုငျး၊ ၁၀ လပိုငျးဆိုတာ မိုး ကောငျးတဲ့အခြိနျကွီးလေ။ ဒါဟာ အဓိက အခကျအခဲ ဖွဈတယျ။ ၂၀၁၅ ခုနှဈတုနျးက ကျောမရှငျက အဲဒီလိုဥပဒေ ထုတျဖူးတယျ။ သို့သျောလညျးခွှငျးခကျြအနနေဲ့ သကျဆိုငျရာ ကြောငျးထိုငျဘုနျးကွီးခှငျ့ပွုရငျ လုပျလို့ရတယျပေါ့။ အဲဒီလိုဆိုတော့ ဘုနျးကွီးတှကေ ဒသေအကြိုး၊ ပွညျနယျ အကြိုး၊ နိုငျငံအကြိုး ဒီအကြိုးရှိတဲ့လုပျငနျးရပျတှဆေိုရငျ ဆရာတျောမြားက ခှငျ့ပွုတယျလေ။ ခုတော့ ၂၀၂၀ ပွညျ့နှဈက ဘုနျးကွီးကြောငျးအတှကျ ပွဿနာရှိသှားပွီ။ လူထုစညျးရုံးဖို့ ဆိုတာ ဘာမှ ဘယျလိုလုပျရမှနျးတောငျမသိတော့ဘူး”ဟု ပအိုဝျးအမြိုးသားအဖှဲ့ခြုပျ PNO ပါတီ အ ထှထှေအေတှငျးရေးမှူး ခြုပျ ဦးခှနျသိနျးဖကေ ပွောကွားသညျ။
ပအိုဝျးအမြိုးသားအဖှဲ့ခြုပျ(PNO) ပါတီသညျ ၂၀၁၀ ပွညျ့နှဈ မလေတှငျ ပါတီ ကို စတငျဖှဲ့စညျးတညျထောငျခဲ့ပွီး ၂၀၁၀ ပွညျ့နှဈ အထှထှေရှေေးကောကျပှဲတှငျ ၁၀ နရော၊ ၂၀၁၅ ခုနှဈ အထှထှေရှေေးကောကျ ပှဲတှငျ ၁၀ နရော အနိုငျရရှိခဲ့ ကွောငျး သိရသညျ။ https://news-eleven.com/article/183563
အစိုးရနဲ့ အပဈမရပျရသေးတဲ့ မွောကျပိုငျးအဖှဲ့တှကွေား နိုငျငံရေးဆှေးနှေးပှဲတှေ အမွနျဆုံးစတငျလိုကွောငျး မွောကျပိုငျး သုံးဖှဲ့က ဒီနေ့ ဇူလိုငျ ၂၁ ရကျနမှေ့ာ ကမျးလှမျးလိုကျပါတယျ။
ကငျြးပဖို့ ကွနျ့ကွာနတေဲ့ ပွညျထောငျစုငွိမျးခမျြးရေးညီလာခံကိုလညျး ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈအန်တရာယျကို ထိနျးခြုပျနိုငျတဲ့ အခွအေနအေောကျမှာ ပွနျလညျကငျြးပမယျဆိုရငျ “ဝ” တပျဖှဲ့ ဦးဆောငျတဲ့ FPNCC ရဲ့ လမျးညှနျမှုနဲ့ တကျရောကျဖို့ ဆန်ဒရှိကွောငျး ကိုးကနျ့ MNDAA၊ ပလောငျ PSLF နဲ့ AA ရက်ခိုငျ့တပျမတျောတို့က ကွညောခကျြထုတျလိုကျတာပါ။
၂၁ ရာစုပငျလုံညီလာခံ တကျရောကျဖို့ မွောကျပိုငျးအဖှဲ့တှကေို ဖိတျဖို့ အစီအစဉျရှိလားလို့ ဇူလိုငျ ၁၇ ရကျနကေ့ သတငျးစာ ရှငျးလငျးပှဲမှာ သမ်မတရုံး ပွောရေးဆိုခှငျ့ရှိသူ ဦးဇျောဌေး ကို RFA က မေးမွနျးရာမှာတော့ ၂၁ ရာစု ပငျလုံညီလာခံကငျြးပ မယျ့ သွဂုတျလဆနျးမှာ ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈကာကှယျ ထိနျးခြုပျရေးလုပျငနျးစဉျတှကေို အစိုးရ လုပျဆောငျနရေဆဲဖွဈကွောငျး၊ ညီလာခံကို တကျရောကျဖို့ မွောကျပိုငျးအဖှဲ့တှဟော ပွညျပကနေ လကွေောငျးနဲ့ ဝငျရောကျလာရမှာဖွဈတဲ့အတှကျ အခကျအခဲတှရှေိကွောငျး၊ အခကျအခဲတှေ ရှိတဲ့ကွားကနေ အစိုးရက ညှိနှိုငျးဆောငျရှကျနဆေဲဖွဈကွောငျး ဖွကွေားထားပါ တယျ။ https://www.facebook.com/rfaburmese
ခငျြးပွညျနယျ ပလကျဝမွို့နယျ တုနျးမဝကြေးရှာသား ဦးလှကြျောကို AA အဖှဲ့က ဖမျးဆီးပွီး သတျဖွတျခဲ့တာကို ပွငျးထနျစှာ ကနျ့ကှကျရှုတျခကြွောငျး ခူမီးခငျြးမြိုးနှယျစုမြားရေးရာ ပေါငျးစပျညှိနှိုငျးရေးကောငျစီ KACC က ဒီနထေု့တျပွနျလိုကျပါတယျ။
AA အဖှဲ့အနနေဲ့ ခငျြးတိုငျးရငျးသား လကျနကျကိုငျမဟုတျဘဲ ပလကျဝမှာ အခွခေတြဲ့အပွငျ အရပျသားတှကေို ဖမျးဆီး သတျဖွတျတာတှလေုပျနတောကို လုံးဝကနျ့ကှကျရှုတျခကြွောငျးနဲ့ နောကျထပျဒါမြိုးတှမေလုပျဖို့ KACC အဖှဲ့ ပွောရေးဆို ခှငျ့ရှိသူ မိုငျနနျးဝကေ ပွောပါတယျ။ သဆေုံးသူအသကျ ၆၂ နှဈအရှယျ ဦးလှကြျောဟာ ဇှနျလ ၅ ရကျနကေ့ ကြေးရှာ အတှကျ ဆနျရှာဖို့ ပိခြောငျး၊ ငသရိုငျးဘကျကို သှားရောကျရာမှာ AA အဖှဲ့က ဖမျးဆီးသှားတာလို့ ဒသေခံတှေ ပွောပွခကျြ အရ သိရတယျလို့ ထုတျပွနျခကျြမှာ ပွောထားပါတယျ။ KACC အဖှဲ့အနနေဲ့ ဦးလှကြျော လှတျမွောကျရေးအတှကျ ကွိုးစား ခဲ့ပမေယျ့ ဇူလိုငျလ ၁၇ ရကျနမှေ့ာ သူ့အလောငျးကို မိသားစုဝငျတှကေ တှရှေိ့ပွီး ဇူလိုငျလ ၁၉ ရကျနမှေ့ာ သင်ျဂွိုဟျခဲ့ တယျလို့ ဆိုပါတယျ။ https://www.faceboo k.com/ rfaburmese
ကရငျပွညျနယျ၊ ဖာပှနျဒသေခံ ရှာသူအမြိုးသမီးတဈဦးကို တပျမတျောသားနှဈဦးက ဇူလိုငျလ ၁၆ရကျနတှေ့ငျ သနေတျဖွငျ့ ပဈသတျခဲ့မှုအပျေါ စုံစမျးဖျောထုတျ အရေးယူပေးရနျ ပွညျနယျ ပဈခတျတိုကျခိုကျမှုရပျစဲရေးဆိုငျရာ ပူးတှဲစောငျ့ကွညျ့ရေး ကျောမတီ(JMC-S)ထံသို့ KNU-ကရငျအမြိုးသားအစညျးအရုံး၏ ကရငျအမြိုးသားလှတျမွောကျရေးတပျဖှဲ့-KNLA တပျမဟာ (၅) ဇူလိုငျလ ၁၈ရကျ နစှေဲ့ဖွငျ့ တိုငျကွားစာပေးပို့လိုကျသညျ။
မူတရျော(ဖာပှနျ)ခရိုငျ၊ ဒှယျလိုးမွို့နယျ၊ ပိုလိုးထာကြေးရှာရှိ အသကျ (၄၀)အရှယျ နျောမုနျော ဆိုသူကို ခိုးသှီးထာ (လှဂှနျးပြို)ကြေးရှာအခွစေိုကျစခနျး အမှတျ(၈) စဈကှပျကဲရေးဌာနခြုပျ(စကခ) လကျအောကျခံ၊ ခွလေငျြတပျရငျး (ခလရ-၄၀၉)မှ တပျသားနှဈဦးဖွဈသော မောငျသနျးမိုးလှငျနှငျ့ မောငျအေးမငျးသူ တို့က နအေိမျ၌ပငျ အကွောငျးမဲ့ပဈသတျခဲ့ပွီး လကျဝတျရတနာမြားကို ခြှတျယူသှားကွောငျး ယငျးတိုငျကွားစာ၌ ဖျောပွထားသညျ။
ငွိမျးခမျြးရေး ဆှေးနှေးစဉျကာလအတှငျး ယခုလို လုပျရပျမြားသညျ တဈနိုငျငံလုံးပဈခတျတိုကျခိုကျမှု ရပျစဲရေး သဘောတူစာခြုပျ(NCA)ပါ သဘောတူညီခကျြမြားကို ဖောကျဖကျြကြူးလှနျရာရောကျပွီး ၎င်းငျးဖွဈရပျအပျေါ KNLA တပျမဟာ (၅)အနဖွေငျ့ အပွငျးအထနျ ကနျ့ကှကျကွောငျးနှငျ့ ဖွဈစဉျအပျေါ စုံစမျးဖျောထုတျ အရေးယူသှားရမညျ ဖွဈကွောငျး တိုငျကွားလိုကျခွငျးဖွဈသညျ။ https://www.bnionline.net/mm/news-74366
ရခိုငျပွညျနယျ ၊ အမျးမွို့ပျေါတှငျရောကျရှိနသေညျ့ ခငျြးစဈဘေးရှောငျပွညျသူမြားအတှကျ ရိက်ခာဆနျနှငျ့ နထေိုငျစရာ ယာယီအဆောငျမြားအရေးတကွီးလိုအပျနသေညျဟု ခငျြးစဈဘေးရှောငျပွညျသူမြား အရေးပျေါကူညီရေးနှငျ့ ပွနျလညျထူ ထောငျရေး ကျောမတီ(RRCCI) ဥက်ကဌ ဆလိုငျးအိုကျဇကျခငျကပွောသညျ။
“လောလောဆယျတော့ စခနျး (၂) ခုထဲမှာ လူဦး ၁၅၃၄ ဦး ရှိတယျ ခငျြးရော ရခိုငျရော ရှိတယျ ။ အမြားစုက ခငျြးလူမြိုး မြားတယျ။ စခနျးအပွငျဖကျမှာ ကိုယျ့အစီအစဉျနဲ့ကို ကိုယျထူကိုယျထနကွေတဲ့ သူတှရှေိတယျ သူတို့က ၃၀ဝ၀ လောကျရှိ တယျ၊ စာရငျးကောကျတာ ၁၉၆၀ ဦးစာရငျးရတယျ၊ ကနျြတာတော့ ကောကျနဆေဲပဲ၊ အဓိကသူတို့လိုတာက စားစရာဆနျ ၊ နစေရာ ၊ လုံခွုံရေး သှားရေးလာရေးခကျတယျ ၊ ကနျြးမာရေး နဲ့ပညာရေးတှေ အခကျအခဲရှိတာပေါ့ ” ဟု (RRCCI) ဥက်ကဌ ဆလိုငျးအိုကျဇကျခငျက ပွောသညျ။
ယခုလကျရှိ အမျးမွို့ပျေါတှငျ စဈဘေးရှောငျစခနျးအမှတျ (၁)နှငျ့ အမှတျ (၂) ဟူ၍ စခနျးနှဈခုရှိပွီး အစိုးရဖကျမှ စခနျးအတှငျးရှိ စဈဘေးရှောငျပွညျသူမြားကိုတာဝနျယူကာ စခနျးတှငျနရောထိုငျခငျးမလုံလော ကျမှုကွောငျ့ စခနျးအပွငျဖကျ တှငျ ကိုယျ့အစီစဉျနှငျ့ကိုယျနထေိုငျကွသော စဈဘေးရှောငျပွညျသူမြားကိုမူ တာဝနျမယူပေးသညျ့အတှကျ အခကျကွုံတှေ့ နကွေရသညျဟု ၎င်းငျးကဆကျပွောသညျ။
“အစိုးရဖကျကတော့ စခနျး(၂)ခုထဲမှာရှိတဲ့ပွညျသူတှကေိုတော့ တာဝနျယူပေးတာပေါ့ ၊ စခနျးအပွငျဖကျမှာရှိတဲ့ သူတှကေို တော့ အစိုးရကဖကျတော့ တာဝနျမယူဘူး၊ စခနျးအပွငျဖကျမှာရှိသူတှကေို လူမူရေး ၊ ဘာသာရေးအဖှဲ့အစညျးတှကေ ဝိုငျးကူညီတာပေါ့၊ နောကျထပျ စခနျးတခုလိုတယျလို့ ပွောတယျ ၊ ကြှနျတျောတို့ကလညျး အဲ့ဒီကိစ်စကို စခနျးတခုထပျရ အောငျ ပွောပေးနတေယျ ” ဟု ဆလိုငျးအိုကျဇကျခငျကပွောသညျ။ https://www.bnionline.net/mm/news-74377
၂၀၂၀ ခုနှဈအထှထှေရှေေးကောကျပှဲကို နိုဝငျဘာလတှငျကငျြးပမညျဖွဈသောကွာငျ့ ဇှနျလ ၂၆ရကျနကေ့ ထုတျပွနျလိုကျ သညျ့ (Code Of Conduct) ကို လိုကျနာကွမညျ့နိုငျငံရေးပါတီမြားနှငျ့ ကိုယျစားလှယျလောငျးမြားအတှကျ စောငျ့ကွညျ့ ကွပျမတျရေး ကျောမတီ တဈရပျဖှဲ့စညျးသှားရနျ နိုငျငံရေးပါတီ ၅၀ ကြျောက ဆှေးနှေးနကွေသညျ။
ရှေးကောကျပှဲကျောမရှငျက ထုတျပွနျသော နိုငျငံရေးပါတီမြားနှငျ့ ကိုယျစားလှယျလောငျးမြား လိုကျနာရနျကငျြ့ဝတျကို သဘောတူညီလကျမှတျရေးထိုးပွီးဖွဈသညျ့ အာဏာရ အမြိုးသားဒီမိုကရစေီအဖှဲ့ခြုပျပါဝငျသော ပါတီမြား အစုအဖှဲ့က CoC ကွပျမတျရေးကျောမတီကို ဇူလိုငျ ၁၇ မှစတငျ၍ ရနျကုနျမွို့ မလီယာဟိုတယျတှငျ ဆှေးနှေးနကွေခွငျးဖွဈသညျ။
“ဒါက ကငျြ့ဝတျပဲ၊ ရှေးကောကျပှဲကွီးပကျြသှားတဲ့အထိတော့မဖွဈလောကျဘူး။ ပကျြသှားမယျဆို ရာဇာဝတျကွောငျးလာ မယျ။ တရားမကွောငျးအရငျလာမယျ။ မတရားမဲ့ပွုကငျြ့မှုတို့ ရှေးကောကျပှဲဆိုငျရာ ပွဈမှုတှလောမယျ။ အခုကဒီအဆငျ့မြိုး မရောကျပါဘူး။ ကငျြ့ဝတျဆိုတာပွညျသူတှကေသိမယျ။ ပါတီတှကေ ကငျြ့ဝတျသိပျက်ခာရှိသလားမရှိသလား ဘယျပါတီ ကတော့ ကငျြ့ဝတျသိက်ခာစောငျ့ထိနျးတယျ။ ရှေးကောကျပှဲကငျြ့ဝတျ အဲဒါပါပဲ “ အမြိုးသားဒီမိုကရစေီအဖှဲ့ခြုပျ၏ အရနျဗဟို ကျောမတီအဖှဲ့ဝငျဖွဈသူ ဦးကြျောဟိုးက ပွောသညျ။ https://www.bnionline.net/mm/news-74332
သြှမျးပွညျတောငျပိုငျး ဆီဆိုငျမွို့နယျရှိ တပျသိမျးမွနှေငျ့ ပတျသကျပွီး အစားထိုး ပွနျပေးမညျ့ကိစ်စသညျ့ တိုငျးရငျးသား အခငျြးခငျြးကွား ပွဿနာ ဖွဈနိုငျကွောငျး မွသေိမျးခံရသညျ့ တောငျသူမြားက ပွောဆိုလိုကျသညျ။
အဆိုပါပွောဆိုမှုသညျ ဇူလိုငျ (၂၀)ရကျတှငျ တောငျကွီးမွို့ ထိနျသာဟိုတယျတှငျ ပွုလုပျသညျ့ မွသေိမျးဆညျးခံရသညျ့ တောငျသူလယျသမားမြား၏ သတငျးစာရှငျးလငျးပှဲတှငျ တောငျသူမြားက ပွောဆိုလိုကျခွငျးဖွဈသညျ။
ဆီဆိုငျမွို့နယျ တပျသိမျးခံရသညျ့ မွမြေား အစားထိုး ပွနျပေးရာတှငျ သြှမျးတိုငျးရငျးသားတို့ နထေိုငျရာ ဒသေရှိ ကုနျးမွငျ့ မွမြေားကို ဖျောပွီးပွနျပေးမညျဖွဈသဖွငျ့ တိုငျးရငျးသားအခငျြးခငျြး ပွသာနာဖွဈအောငျ လုပျပေးလိုကျသညျ့ သဘောဖွဈ ကွောငျး လယျယာမွသေိမျးခံရသညျ့ ပအိုဝျးတောငျသူ ခှနျခဈြထှေးက ပွောသညျ။
အစားထိုး ပွနျပေးမညျ့ မွယောမြားသညျ ကုနျးမွငျ့မွမြေားဖွဈပွီး သြှမျးတိုငျးရငျးသားမြား ဘိုးဘှားစဉျဆကျ စိုကျပြိုး ထိနျးသိမျးထားသညျ့ သဈတောမြားဖွဈပွီး၊ ထိုဖျောထားသညျ့မွမြေားကို ပအိုဝျးတောငျသူမြားလကျခံလိုကျပါက ပအိုဝျး နှငျ့ သြှမျး နောကျဆကျတှဲပွဿနာဖွဈလာနိုငျကွောငျး ခှနျခဈြထှေး က ထပျလောငျးပွောသညျ။ https://www.bnionline.net/ mm/news-74379
ကယားပွညျနယျတခုလုံးမှာ ပွနျလညျဖှငျ့လှဈရမယျ့ အခွခေံပညာအထကျတနျးကြောငျးနဲ့ အထကျတနျးကြောငျးခှဲပေါငျး ၅၆ ကြောငျးရှိတဲ့အနကျ ၁၈ ကြောငျးသာ ဖှငျ့လှဈနိုငျသေးတယျလို့ ကယားပွညျနယျ ပညာရေးမှူး ဦးလူစီယားနိုက ဒီဗှီဘီကို ပွောပါတယျ။
အခွခေံပညာအထကျတနျးကြောငျးတှကေို ဇူလိုငျ ၂၁ ရကျနမှေ့ာ ပွနျလညျဖှငျ့လှဈရ မှာဖွဈပမေယျ့ ကိုဗဈ-၁၉ ကာကှယျ ထိနျးခြုပျရေး လမျးညှနျခကျြအတိုငျး သတျမှတျထားတဲ့ အဆငျ့တှရေ (A) အဆငျ့ ဝငျတဲ့ကြောငျးတှကေိုသာ ဖှငျ့ခှငျ့ပွုတာ ဖွဈကွောငျး ပညာရေးမှူး ဦးလူစီယားနိုက ပွောပါတယျ။ “ကနြျောတို့ ကိုဗဈ-၁၉ ကာကှယျထိနျးခြုပျရေး လမျးညှနျခကျြ အတိုငျး သတျမှတျထားတဲ့ စံအတိုငျး ကနဦးစဈဆေးတဲ့အခါမှာ A အဆငျ့ဝငျတဲ့ကြောငျးတှကေို အရငျဆုံး ဖှငျ့ခှငျ့ပွု လိုကျတာပေါ့။ ကယားပွညျနယျအနနေဲ့က A အဆငျ့ဝငျတဲ့ အခွခေံပညာကြောငျး ၁၈ ကြောငျးရယျ၊ ကိုယျပိုငျကြောငျး ၄ ကြောငျးပေါ့။” ဒီကနပွေ့နျလညျဖှငျ့ခှငျ့ရတဲ့ အခွခေံပညာကြောငျးတှကေတော့ လှိုငျကျောမွို့နယျမှာ ၄ ကြောငျး၊ ဒီးမော့ဆို မွို့နယျမှာ ၁၃ ကြောငျး၊ ဘောလခဲမွို့နယျ ရှာသဈမှာ ၁ ကြောငျးရှိပွီး Z ရှားတော၊ ဖားဆောငျး နဲ့ မယျစဲ့မွို့နယျ တှမှော တော့ ဖှငျ့ခှငျ့မရသေးပါဘူး။ “မရှိသေးပါဘူးဆိုတာက ကနြျောတို့က ကနဦးစဈဆေးခကျြဆိုတာရှိ တယျ။ ကနဦး check list နဲ့သှားစဈတဲ့အခါမှာ ပထမဆုံးစစဈကတညျးက A အဆငျ့ဝငျတဲ့ကြောငျးကို ကနဦး ဖှငျ့ခှငျ့ပေး ထားပါတယျ။ အဲတော့ လိုအပျခကျြလေးတှေ အနညျးအကဉျြးရှိတဲ့ကြောငျးကို B အဆငျ့ သတျမှတျတယျ။ B လို့သတျမှတျတဲ့ကြောငျးတှကေို လိုအပျ ခကျြလေးတှေ ဖွညျ့ဆညျးပေးပွီးတော့ A အဆငျ့ဖွဈအောငျ ကနြျောတို့ ပွနျလုပျပေးရတာဖွဈပါတယျ။” လို့ ဦးလူစီယားနိုက ပွောပါတယျ။
ကနျြရှိနတေဲ့ကြောငျးတှကေိုလညျး အခြိနျတိုအတှငျး အားလုံးနီးပါ ဆကျလကျဖှငျ့လှဈသှားမှာ ဖွဈတယျလို့လညျး ပွညျနယျ ပညာရေးမှူးက ပွောပါတယျ။ ဖှငျ့လှဈနိုငျတဲ့ ကြောငျးတှတှေမှောလညျး ဆရာ၊ ဆရာမတှေ၊ ကြောငျးသူ/ကြောငျးသား တှေ ကြောငျးတှငျးဝငျရောကျလာပါက ကနျြးမာရေးဝနျကွီးဌာနမှ သတျမှတျ ညှနျကွားခကျြနဲ့အညီ ကိုယျအပူခြိနျ တိုငျးတာ၊ လကျဆေးတာ၊ (၆)ပအေကှာ ကြောငျးတကျနိုငျရေးနဲ့ စာသငျခနျးအတှငျး စနဈတကြ သငျကွားပို့ခနြိုငျရေး ဆောငျရှကျထား ရှိထားပါတယျ။ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ပညာသငျနှဈ ကယားပွညျနယျမှာ အခွခေံပညာအထကျတနျး ကြောငျးအဆငျ့ ၅၆ ကြောငျး၊ ကိုယျပိုငျ အထကျတနျးကြောငျး (၆)ကြောငျး စုစုပေါငျး ၆၂ ကြောငျးရှိပွီး Grade-10 တကျမယျ့ ကြောငျးသား ကြောငျးသူ ၄၀ဝ၀ ကြျောနဲ့ Grade-11 တကျရမယျ့ ကြောငျးသား/ကြောငျးသူ ၄၀ဝ၀ ကြျော ရှိကွောငျးသိရပါတယျ။ http://burmese.dvb.no/archives/400740
ရခိုငျပွညျနယျ တောငျကုတျမွို့နယျ ရှာမရဲကငျးစခနျးမှာ တာဝနျကနြတေဲ့ ရဲတပျသား သကျထှဋျအောငျဟာ ဇူလိုငျလ ၂၀ ရကျနညေ့နကေ သူကိုငျဆောငျထားတဲ့သနေတျနဲ့ သူ့ကိုယျသူ ပဈခတျသဆေုံးသှားခဲ့တယျလို့ တောငျကုတျမွို့နယျ ရဲတပျဖှဲ့မှူးက ဒီဗှီဘီကို ပွောပါတယျ။
တောငျကုတျမွို့နယျရဲတပျဖှဲ့မှူး ရဲမှူးသနျးနိုငျ က “ည ၆ နာရီလောကျမှာ ရှာမ ရဲကငျးစခနျးက ရဲတပျသား သကျထှဋျအောငျ ဆိုတဲ့သူပေါ့၊ သူက စိတျကရောကငျခွောကျခွား ဖွဈပွီးတော့ သူ့ကိုထုတျပေးထားတဲ့သနေတျနဲ့ ကိုယျ့ဟာကိုသတျသသှေား တာပေါ့”လို့ ပွောပါတယျ။ အဆိုပါ ရဲတပျသား သကျထှဋျအောငျသဆေုံးမှုနဲ့ပတျသကျပွီး တောငျကုတျမွို့မရဲစခနျးမှာ သမှေုသခေငျး ဖှငျ့လှဈပွီးစဈဆေးနတေယျလို့ သိရပါတယျ။
လှနျခဲ့တဲ့ ၁ နှဈကြျောလောကျကလညျး တောငျကုတျမွို့မရဲစခနျးမှ တာဝနျထမျးဆောငျနေ တဲ့ စခနျးမှူးတဈဦးဟာလညျး သတျသမှေုတခုဖွဈပှားခဲ့ပါတယျ။ http://burmese.dvb.no/archives/400735